Asa any ivelany any Dubai 🥇 【Mitadiava sy mangataka fialan-tsasatra any UAE】
Asa any ivelany any Dubai - Mitadiava ary mangataka fialan-tsasatra any UAE
Tetikasa fampiroboroboana ao Dubai
Janoary 27, 2018
navoakan'ny Dubai City Company at Janoary 20, 2018
Asa any ivelany Dubai
Mijery Internet ny Joba Joba!
Miasa any ivelany Dubai amin'ny Dubai City Company. Jereo ny Job Seekers avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Manome fanampiana amin'ny fikarohana asa banga amin'ny asa izahay Emira Arabo Mitambatra. Raha mitady karamaina ianao, any Dubai. Izahay eto dia hanampy anao hahita asa banga ao UAE. Izahay dia manampy amin'ny fahazoana asa any Dubai. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny mijery ny tolotra ataonay ho an'ny fanangonam-baovao.
Ny ekipan'ny mpanafika dia mitaky asa vaksiny maromaro any UAE. Miasa any ivelany any Dubai, izany no tadiavin'ny tsirairay ary isika eto mba hanampy anao hahita asa any Dubai City. Isaky ny mpihaza asa iraisam-pirenena dia azo antoka fa miasa ao Dubai. Dubai City Company manampy amin'ny mahita ny asa tsara indrindra atolotra any Dubai sy Abu Dhabi. Nefa alohan'ny hifindranao dia renivohitra Arabo Mitambatra Emirates. Tsidiho azafady fitarihana ho an'ny mpikaroka. Mila manana fampahalalana vitsivitsy amin'ny tanana ianao mba hahazoanao asa any Dubai.
Mijery olona miavaka isika izay afaka miasa ho antsika. Isika dia eo am-piandrasana ny olona marefo, mahay sy mientanentana. Ianao ve mitady asa any Dubai?. Manana toerana maro ao Dubai isika. Mandritra izany fotoana izany, Ny fahafahana manao asa sy ny asa any Dubai City dia misokatra ho anao. Amin'ity resaka ity, izahay dia Company Dubai City ary toy ny fanoharana. Isika no orinasam-piantsorohana lehibe ary toerana hiasa any UAE. Mitady mpikatsaka asa amin'ny asa isika. Miasa any ivelany tsy misy traikefa. Tsy olana izany.
Alefaso ny fialana amin'ny asa any ivelany any UAE
Amin'ny ankapobeny, tianay ny mametraka anao amin'ny asa vaovao any Dubai!
Ny orinasa City Dubai dia manome asa torohevitra. Ny fandaharan'asa fikarohana momba ny asa sy fomba hivarotana any Dubai. Ho lasa fomba vaovao ho an'ireo mpila ravinahitra any UAE. Raha avy any ivelany ianao ary miandrandra ny hahita asa. Ny orinasanay dia tena ho anao. Raha ny tena izy, ny orinasa Emiratika manerantany any Afovoany Atsinanana. Ary isika dia iray amin'ireo mpamatsy asa tsara indrindra ho an'ny asa any Dubai sy Abou Dhabi.
Asa any ivelany Dubai ho an'ny Expats
Ny toerana tsara indrindra ho an'ny asa tany Moyen Orient, Dubai. Ny zava-misy dia raha tsy izany ianao how mba hahita karatra iraisam-pirenena amin'ny hotely Management UAE. Afaka manampy anao ny orinasanay mahita asa ao anatin'ny 60 andro. Na dia mety ho marina ihany ity fampidinana fampiakarana ity. Ho an'ny orinasantsika amin'ny maha premium azy dia hitondra anao eny amin'ny birao ho an'ny mpampiasa Afovoany Atsinanana.
Asa any ivelany Dubai - Miara-miasa ao an-tanànan'i Dubai izahay!
Alefaso alefaso any amin'ny Embassy any Dubai
Azafady zahao aminay tranonkalan'ny mpikaroka hanampy ny hafa!
Miaraha aminay Miasa any Dubai izahay!
Miandry ny fiverenanao ianao Asa any ivelany Dubai. We would Tiako ny manampy anao hahazo asa any UAE. Na izany aza, tsy afaka manery ny orinasa hafa izahay hanome anao nofinofy. Fa raha afaka manampy anao izahay, dia hataonay aminao izany. Ny tanjon'ireo mpikaroka momba ny asa eran-tany dia ny tia an'i Dubai. Ho afaka hanampy anao amin'ity manam-pahaizana momba ny fandraisana mpiasa ity izahay. Indrindra raha toa ianao ka Indiana mpikatsaka karama. Ny orinasan-tserasera Dubai dia hiandrandra ny hikarakarana anao.
Mba hanampiana anao. Raha toa ka hanam-bintana izahay dia manamboatra mpanafika anareo. Ny ekipan'ny mpividy dia hanao izany ho azo antoka. Ny orinasa Dubai City dia tokony hanampy anao ry zalahy. Ny orinasa fandraisam-bahiny dia manampy olona maro mitady ny mitady Employment Abroad Dubai. Indrindra raha avy any Afrika Atsimo ianao. na dia Mpikaroka Pakistane mahita asa miaraka amintsika.
Momba ny andro 60 Asa any ivelany Dubai - Fotoana ilaintsika izany mba hanomezan-doka anao any Dubai. Mba hametrahana izany fomba hafa izany, ny tanjom-pikarohan'ny asa dia dingana lava - Eny marina fa tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny Linkedin sy ny hafa job sites. Zava-dehibe ny mahatsapa ny miezaka mifandray amin'ny manampahefana HR sy mpandraharaha. Mandehana mankany amin'ny LinkedIn ary andramo ny raki-daza mifandraika sy ny andaniny. Mandra-pahatongan 'ireo mpanankarena rehetra any Dubai. Izany dia ny hany làlan-kizorana amin'izao fotoana izao ary afaka manampy anao.
Miara-miasa amin'ny mpiasa any Emirates any Dubai izahay
Mitady asa any Dubai ve ianao ?. Miaraka amin'ny orinasanay, afaka mahita asa haingana ianao. Ny ekipa mpilatsaka an-tsitrapo dia eto manampy anao hahita asa mahatalanjona ao Abu Dhabi, tahaka antsika Dubai City Company mitady asa ny rantsika. Amin'ny lafiny tsara ny mahita asa any Emirates amin'ny Dubai City Company dia mora. Amin'ny fanadihadiana farany, tsindrio ny sary etsy ambany ary mifandraisa amin'ny orinasa Emirates.
Afaka miasa any ivelany any Dubai ho an'ny fandefasana vola!
Jobs in Emirates - Afaka mahazo asa any Emirates ianao. Ianao ve fitadiavana asa mahatalanjona asa any Dubai?. Raha ny zava-misy marina, ny tsirairay avy any ivelany ao Dubai Searching for vacancies amazing since day one when they land. Noho izany dia eto izahay mba hanampy anao amin'ny fikarohanao asa. Iray amin'ireo orinasa tokony hijerena ny fikarohana nataonao dia Emirates. Misy ihany koa fivarotana Emirates, mazava ho azy, azonao atao ny maka azy io mahita asa vaksiny miaraka aminy any UAE.
Miara-miasa amin'ireo mpikatsaka asa any Dubai izahay
Mitady anao aho asa any Dubai?. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahita asa any amin'ny kafe Starbucks ianao. Mba hametrahana azy amin'ny fomba hafa, tiantsika ny manampy na dia Tranokala Emirates ao amin'ny Golfa. Manantena ianao fa hiasa amin'ny orinasa Emirates. Satria mahita asa mahatalanjona ianao ao Dubai na Abu Dhabi.
Dubai City Company mitady kandidà vaovao mba hiara-hiasa amin'ny ekipa mpilalao ao Gulf. Ny fametrahana ho an'ny Emirates Jobs dia ao amin'ny rà Arabo. Aza mandany andro sy tena hahita asa aminay. Raha mikaroka ianao Asa an-tanety azonao atao koa ny mandefa Resume amin'ny orinasantsika. Miasa amin'ny expats ny asa miasa any ivelany any Dubai.
Maro ireo safidy ho an'ny mpikaroka iraisam-pirenena any UAE. Asehontsika fa mitady asa fomba fitadiavana asa any Dubai. Eto izahay hanampy anao ho tonga expat ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Manampy ny mpitatitra entana vaovao avy any India sy Pakistan ny orinasam-pifandraisana Dubai mba hahita asa.
Mitady vehivavy monina any UAE izahay
Te-hiasa amin'ny BP ve ianao? Noho izany antony izany dia matetika isika no manavao ny tranokalantsika. Miandry isika ho an'ny vehivavy vahiny sy vahiny kandidà any ivelany. Ny fanondroana dia mitady any Afrika Atsimo isika, miaraka Indian ireo mpila ravinahitra izay mitady hanomboka asa any Dubai. Miaraka amin'ny orinasantsika, ny tsirairay dia manana fahafahana hiasa ao amin'ny Petroleum Britanika. Ny hany tokony ataonao dia ny mandefa CV aminay. Ny adiresy mailaka dia nomena eo an-tampon'ny pejy.
Ny Emira Arabo Mitambatra dia iray amin'ny tsara indrindra ho an'ny vehivavy vahiny. Na inona na inona zom-pirenena zary vehivavy, dia manolotra asa i Dubai sy Abu Dhabi. Indrindra ny Ny tanànan'i Dubai City dia natao ho an'ny vehivavy vahiny. Amin'izao fotoana izao dia ny toerana malaza indrindra amin'ny mpitantana vehivavy. Asa any amin'ny trano fandraisam-bahiny ve i Dubai dia afaka mahita asa amin'ny toerana maromaro. Avy amin'ny asa fototra ho ankizivavikely hatrany amin'ny hotely mpanatanteraka mpitantana ny toerana banga.
Ireo mpikaroka vaovao dia manomboka mampiasa finday ao Dubai
Ny vanim-potoana vaovao momba ny asa fitadiavana sy ny asa any ivelany any Dubai dia tonga. Ianao dia afaka mahita asa amin'ny finday any Emirà Arabo Mitambatra. Ankehitriny finday, azonao atao ny zavatra rehetra. Ohatra, azonao atao ny mampiasa ny android anao mba hahitana vavahadin-tserasera asa vaovao. Atombohy ny mandefa ny CV manerana ny UAE miaraka amin'ny kitay iray. Ankoatr'izay, azonao atao izao manambana Dubai. Ho an'ireo mitady asa vaovao any Dubai. Ny finday dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra azo ampiasaina.
Eny e! Google dia manangona ho an'ny fampiharana finday finday. Amin'izany, ao an-tsainao dia tokony handinihanao tsenam-pivarotana finday finday. Ohatra, afaka miresaka amin'ny solontenan'ny orinasa maro ianao. Ny orinasanay dia nanangana tambajotra maromaro. Ohatra iray amin'izany ny iray Bilaogy Dubai ao amin'ny Golfa. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia miaraka amin'ny vondrona misy anay ary apetaho ny CV vaovao anao.
Miasa any ivelany any Dubai ho an'ny fandefasana vola.
Miara-miasa amin'ny Automotive any Afovoany Atsinanana isika
Etsy ankilany, raha toa ianao ka mikaroka karatra fiara amin'ny fiara Dubai afaka manampy anao. Izany no antony nanaovanay ity pejy ity. Araka ny aseho etsy ambony, ny ekipanay dia matetika mamerina famandrihana asa vaovao. Ny orinasa Dubai dia miandry ireo kandidà iraisam-pirenena. Ho an'ny ampahany betsaka, isika dia manamboatra an'i Audi any Afovoany Atsinanana ankehitriny.
Raha ny marina, raha manana traikefa avy any India na ianao Afrika Atsimo ianao mihoatra noho ny fandraisana. Amin'ny lafiny iray, ireo kandidà vaovao izay mikasa ny hanomboka asa any Dubai. Mazava ho azy fa afaka mihatra amin'ny resadresaka vaovao. Azafady koa mandefa taratasy fandefasana vaovao ho an'ny orinasanay.
Amin'izao andro izao, ny vahiny rehetra dia manana fahafahana miasa any ivelany any Dubai sy Find and Apply ho an'ny vaksiny any UAE. Nasaina avokoa ny rehetra mba hampakatra ilay resadresaka. Manana fahafahana hiasa ao amin'ny orinasa Automotive ve ianao ?. Alefaso azafady ny resadresaka amin'ireo mpikarakara an-tariby. Manana asa vitsivitsy fanampiny ihany koa izahay ho an'ireo mitady asa any ivelany.
Miasa any ivelany any Dubai miaraka amin'ny solika
Tsy misy afa-tsy ho an'ny mpikaroka karakarain'ny International
Afaka mahita asa any Dubai ianao miaraka amin'ny Oil and Gas Industry. Ity sehatra ity dia fitomboana voafaritra raharaham-barotra ao UAE. Ohatra, afaka manomboka miasa any ivelany any Dubai sy Abu Dhabi ianao. Indrindra ireo orinasa any Abu Dhabi manakarama ny kandida ho an'ny orinasa petrolika Qatar sy Abu Dhabi. Amin'ny lafiny iray, ireo toerana malaza indrindra mahita orinasa miasa ho an'i Arabia Saodita. Expatriates sy mitady asa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia tia an'io fotsiny toerana.
Hevitra misimisy hafa Ny fitadiavana asa dia ny fanadihadiana mandeha an-tongotra ao Dubai. Io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana mifandray amin'ireo mpitantana any Emirà Arabo Mitambatra. Ary amin'ny fisian'ireo orinasa Dubai City Companies tsara indrindra. Ireo mpikaroka karakarainao dia tokony hijery anao noho ny ankamaroan'ny orinasa Afovoany Atsinanana. Manampy ny asa any Qatar Petroleum, Dubai sy Abu Dhabi Oil ireo. Ny tanjonay dia ny hampifandray anareo anio amin'ny mpampiasa.
Jobs ao Dubai ho an'ny Filipino Expats
Ny orinasa Dubai City ihany koa dia manampy amin'ny asa vaksiny any UAE. Raha mitady hividy ny orinasa Dubai ianao. Eto izahay mba hanampy anao. Rehefa ela ny ela, rehefa tafiditra ao amin'ny orinasa ianao dia afaka mahita vacancies vaovao ao Dubai. Miara-miasa amin'ny vondron'olona vitsivitsy any UAE izahay. Ianao dia afaka miasa any Dubai amin'ny maha Filipino azy Ao Dubai dia manakarama mpitsoa-ponenana izy ireo.
Izany no antony nifindra monina tany Dubai. Manampy ny orinasa recruitment any UAE Filipino ireo mpiasa vahiny. Mazava ho azy, ampio ianao hahita asa any Dubai City amin'ny maha mpiasa mpiasa Filipina anao. Isaky ny mikatsaka ny asa iraisam-pirenena, raha fintinina, dia manana ny fahafahany miasa any Dubai. Ohatra izao isika izao fanofana asa ho an'ny mpampianatra any Dubai. Satria any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana dia be dia be ny vidim-panavotana ho an'ireo mpila ravinahitra vaovao.
Raha ny marina dia miandry isika ho an'ny kandidà amin'ny fampianarana MBA. Satria ao Dubai dia tena sarobidy tokoa izany. Ny mpirotsaka fianarana ambony izay azontsika. Ho mora kokoa amintsika ny hametraka izany.
Tolotra fitadiavam-bola any Dubai?
Ny porofo mampiaiky indrindra fa ny Dubai no tsara indrindra dia karama ambony ho an'ny fikambanana. Aza manahy ny momba ny CV anao miangavy anao anio. Ny ekipanay dia hanampy anao hanomboka anao asa fitadiavam-bola any Emirates. Mahagaga fa azo omena amin'ny 60 Days izany. Manampy firenena maro eran-tany isika mba hapetraka any UAE.
Amin'ny lafiny iray, isika no hany làlana ny fikarohana nataonao any Emirà Arabo Mitambatra ho Indiana mpikaroka asa. Nahoana isika no manome 60 andro ?. Asehoy anay ny fomba fitadiavana asa. Afaka mampifandray anao amin'ny mpitantana mpiasa ianao. Araka ny nomarihina fotsiny fa hiandry ny fanavaozana ny fifandraisana dia tonga feno. Ary tonga mpiasa iray mpitsoa-ponenana mahafinaritra ao Dubai.
Isika no hany orinasa any an-tsena izay tsy mitady mpikaroka asa. Tianay fotsiny ny hanampy ny olona hahita asa nofinofy any Dubai. Saingy amin'ny tranga iray izay tsy manampy ny kandidà. Haverinay any amin'ny kaontinao ny volanao. Amin'ny ankapobeny, ny ekipanay dia manampy anao amin'ny asa any ivelany any Dubai.
Iza, Nahoana, Oviana, Taiza?
Dubai Amin'ny Tanjon'ny Joba - Izay Tokony ho Fantatrao
Dubai, fanjakana faharoa an'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) raha ny habeny, Dubai, dia haben'ny toekarena manerantany. Betsaka ny olona manasa-tena hitady asa any amin'ny faritra indrindra amin'ny tombontsoa mety ho azon'izy ireo eto, anisan'izany ny mizana karama tsara, ny kolontsainan'ny asa lehibe, ny fomba fiainana miramirana, ny vola tsy mandoa hetra ary ny tarehiny mampitolagaga. Iray amin'ireo fanjakana malalaka indrindra fantatra amin'ny taham-pandrosoana avo lenta izy. Mety ho an'ny mpanondrana fananana fananana ao amin'ny fanjakana fanjakan'i Dubai aza, tsy toy ny firenen-kafa any Atsinanana. Izany no mahatonga azy io ho safidy farany ho an'ireo mpikaroka amin'ny asa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hitady asa any amin'ity faritra ity.
Ireo sehatra samihafa momba ny asa any Dubai
Ny ankamaroan'ireo firenena mandroso any Afovoany Atsinanana dia miankina amin'ny solika ihany no sehatra voalohany ho an'ny toekareny. Saingy ny zavatra hafa ho an'i Dubai dia hafa. Be dia be mandroso izao ny indostria any Dubai, misarika ireo mpikaroka amin'ny asa avy any India, Pakistan, Bangladesh ary faritra maro hafa ao Azia hiasa amin'ireo sehatra mitombo. Ny indostrian'ny indostria lehibe ankoatry ny solika sy ny entona amin'izao fotoana izao ao Dubai dia ny fizahantany, fananganana, serivisy ara-bola ary trano tena betsaka.
Fanolorana sy tombontsoa hafa
Ny karama ambony sy trano fividianana haba dia mahatonga an'i Dubai ho iray amin'ny tampony safidy ho an'ny expats hisafidy Dubai ho iray amin'ny toerana mahomby indrindra amin'ny fiasana. Ny marina dia i Dubai no iray amin'ny fanjakana karama ambony indrindra amin'ireo faritra hafa rehetra ao amin'ny UAE. Ny karama dia afaka mitety faritra manodidina an'i AED 75,000 mandritra ny iray volana mandritra ny iray volana ho an'ny mpitantana ankapobeny ara-teknika na mpitantana ny rojiste miasa any amin'ny indostrian'ny injeniera, ny solika ary ny entona. Ny talen'ny zokiolona eo amin'ny sehatry ny fananganana dia afaka manangona vola manodidina ny AED 80,000 isam-bolana. Saingy ny sakam-panombohana amin'ny tambin-karama ho an'ny mpitantana sy ny injeniera dia afaka manelanelana eo amin'ny AED 12,000 ka AED 15,000 isam-bolana. Betsaka ny antony mahatonga ny karama isam-bolana isam-bolana. Ny tena fahita indrindra dia:
Ny ankamaroan'ireo asa izay manome fandoavam-bola be dia be dia be dia be koa, toy ny fividianana maimaim-poana, faktiora ho an'ny finday, fiara ary tapakila iray isan-taona amin'ny ankamaroan'ny hafa.
Na dia mety ho tsara tarehy ho an'ny asa rehetra ao amin'ny faritra aza ny fonosam-pangatahana, dia matetika misy vola fanampiny. Sarobidy ihany koa ny vidin'ny fiainana ary ilaina ho an'ny mpikatsaka asa izany. Tokony handalo manodidina ny AED 9000 isam-bolana mba handrafetana efitrano trano efitrano 2. Na dia avo aza ny vidiny ho an'ireo tsy misaina, amin'ny alàlan'ny AED 7000 ho an'ny trano efitrano 2. Azo atao ny maka efitrano ao amin'ny ankamaroan'ny trano fampifandraisana miorina manerana ny tanàna amin'ny manodidina ny AED 2000.
Miaraka amin'ny fihenan'ny vidin'ny solika sy ny fikojakojana fiara, safidy tsara ny mividy fiara ho an'ny fitaterana. Ny safidy ny manakarama fiara isam-bolana dia manodidina ny AED 1500 ho an'ny fiara kely hatchback. Raha mitaky AED 2 isaky ny kilometatra ny taxi-dia, ny tsirairay dia afaka miditra ny bus afovoan-tanàna manodidina ny tahan'ny mitovy amin'ny dia.
Izy io dia iray hafa zava-dehibe tokony hosaintsainina ho an'ireo ankizy. Raha ny ankamaroan'ny olona dia mandany fotoana betsaka amin'ny asany am-piasana mba hanangona isaky ny AED, tsy misy sekolim-panjakana izay mitaky zaza manabe vola. Mitovy amin'ny protocol an'ny Governemanta fanjakana any Dubai. Izany no mahatonga ny sekoly tsy miankina sy iraisam-pirenena ihany no safidy ho an'ny expats no hivily ho an'ny fanabeazana ao amin'ny paroasy. Fa ny fandaniana amin'ny saram-pianarana sy ny sarany dia avo be, manomboka eo amin'ny AED 90,000 isan-taona, indrindra ho an'ireo sekoly iraisam-pirenena izay mitarika ao amin'ny faritra ho an'ny paroasy.
Tahaka ny firenena Miozolomana iray hafa, ny herinandro amin'ny herinandro ao Dubai dia maharitra hatramin'ny Alahady hatramin'ny Alakamisy amin'ny ankamaroan'ny indostria. Ho an'ireo fividianana fivarotana sasany sy orinasam-pandraharahana hafa, ny herinandro amin'ny herinandro dia maharitra ny asabotsy ka hatramin'ny alakamisy, zoma (andro masina an'ny silamo) izay tsy misy herinandro toy ny firenena Silamo hafa. Ny ora fiasana ihany koa dia fantatra fa tsy mitovy amin'ny indostria mankany amin'ny orinasa. Ny ora ara-barotra dia matetika miandoha amin'ny 8 AM ny maraina amin'ny 1 AM amin'ny tolakandro manaraka ny telo ora fiatoana. Ny asa dia hiverina amin'ny 4 PM ary hanohy amin'ny ora 3 hafa hatramin'ny 7 PM Mbola misy fiovaovana ho an'ny orinasa orinasa iraisam-pirenena izay miasa matetika amin'ny famantaranandro 9 AM mankany 6 PM Misy fihenam-bidy amin'ny ora fiasana mandritra ny volana Ramadany.
Ireo mpikaroka amin'ny asa mahaliana dia afaka mitodika any amin'ireo vavahadin-tserasera amin'ny asa an-tserasera sy maso ivon-tserasera misambotra olona hitady fotoana malalaka. Azon'izy ireo atao koa ny mampiasa ny tranokalan'ny orinasa hahafantatra bebe kokoa momba ny ambaratonga misy sy ny toerana misy azy ireo. Safidy hafa dia ny hahafantaran'ny namana, olom-pantatra na ny fiantsoana mangatsiaka mba hivoahan'ny sasany.
Torohevitra momba ny fahazoana asa ao UAE
Nandeha tany UAE ny olona noho ny antony samihafa, ny tena lehibe indrindra amin'ny fihazana asa. Ny UAE dia iray amin'ireo toerana ambony indrindra amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fizahan-tany. Nihazakazaka haingana ihany koa ny faritra noho ny toerany sy ny fomba fiasa mahomby. Sahala amin'ny faritra hafa, ny asa dia antony lehibe indrindra amin'ny fifindra-monina any ambanivohitra. Raha marina ny fampandrosoana sy ny fitomboan'ny fotodrafitrasa dia mifamatotra amin'ny tombontsoan'ny asa. Tsy fahazoana antoka ny fitadiavana asa any UAE.
Ny fahafaha-manao asa dia samihafa saingy mitaky mihoatra noho ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manaonao izany. Ny fomba fanaovana fampiharana, ny fomba ampiharanao, ny fotoana tokony hampiharana, ary ny fomba hanatonana mpampiasa dia singa rehetra izay mamaritra ny fihazana asa mahomby. Ny olona sasany dia manana fiheverana ratsy momba ny UAE sy ny fisian'ny asa satria tsy fantany ny fomba hanaovana izany. Ny sasany mahazo asa amin'ny karama ambany.
Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy amin'ny fitadiavana asa any UAE.
Ny UAE dia toeran'ny tanjona voalohany; ny zava-misy dia mitombo ny mpampiasa vola noho ny mety hisian'ny fitomboan'ny faritra; betsaka ny fahafahana miasa. Na izany aza, tsy misy resaka mazava momba ny hahazoana asa any amin'ny firenena Arabo. Ianao dia mila mahalala ny karazana fahaiza-manao manokana sy ny haavon'ny traikefa takiana amin'ny fahaiza-miaina samihafa. Ary koa, tsy maintsy fantatrao ny haavon'ny fenitra ilaina amin'ny orinasa ao amin'ny orinasa tsirairay.
Mazava ho azy fa mila ianao fahaiza-manao mifandraika mba hahazoana asa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ao UAE, mihoatra noho izay ilaina izany. Raha mila asa sahaza amin'ny orinasa malaza ianao, dia mila fahaiza-manao tsara. Nandritra ny fotoana ela dia nitaky fitakiana be ny mpiasa aziatika; Feno rano amin'izao fotoana izao ireo kandidà aziatika, miaraka amin'ny fotoana, nihena ny fangatahana an'ireo kandidà toy izany. Ambony ihany koa ny herin'ny mpiasan'ny mpampiasa any UAE; ireo dia toetra manan-danja amin'ny tontolon'ny orinasa amin'ny firenena Arabo.
Tena ilaina ny fikarohana. Raha ny marina, tokony hampanao ny fangatahanao ianao ary hanomana ireo antotan-taratasy ilaina mandritra ny volana iray amin'ny fitsidihana tianao hatao. Ny ankamaroan'ny orinasa any amin'ny faritra dia mety hanaiky anao amin'ny fe-potoam-piasan'ny 3 herinandro. Tsy maintsy miomana amin'ny toe-javatra toy izany ianao. Ataovy tsara ny devoaranao.
Mitadiava fomba fitsaboana tena mety
Mety tsy ho tafiditra amin'ny firenenao ny fangatahana asa any UAE. Ny fomba fangatahana asa eto dia voafaritra mazava. Ny fandefasana CV iray dia mety tsy hanakaiky anao amin'ny alàlan'ny dinidinika. Raha ny tena izy dia tokony hangataka asa isan-karazany ianao ary ho azonao antoka ny hampiditra taratasy fonony. Isaky ny alefanao mandefa CV sy taratasy fanakonana ianao dia tokony handinika tsara ny CV tsirairay.
Tsy toa ny CV hafa ianao dia mila manome antsipirian'ny VISA. Ny daty fanombohana sy lany dia tsy maintsy atao. Ny firenena dia fehezin'ireo manampahaizana vahiny no mibanjina ny mpampiasa momba ireo antsipirihany toy izany hanamarinana ny olona ampanaovin'izy ireo amin'ny asany. Mazava ho azy fa tokony asongadinao ny fahaiza-manao amin'ny lalao izay ampianarinao. Ankoatr'izay, ianao dia tokony hampiditra ny referansy amin'ny CV-nao na ny taratasinao, dia mitombo ny fahatokisan'ny mpampiasa azy noho izany fotoana be dia be hahazoana anao io asa io. Mba hahazoana tsara kokoa, ampiharo ny asa rehetra misy eo amin'ny sehatry ny fahaizanao.
Tsy azo tsinontsinoavina ny fiantraikan'ny media sosialy. Ny UAE ho toekarena haingana dia niharan'ny revolisiona noho ny teknolojia. Tsy vitan'ny hoe nisy fiantraikany teo amin'ny indostrian'ny orinasa ny Internet fa ny tontolon'ny orinasa. Nifamihina tsikelikely amin'ny sehatra an-tserasera ireo mpampiasa ny resadresaka ifanaovana dinidinika. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny orinasa dia mitaky anao hamita ireo endrika an-tserasera, apetaho ny CV anao ary miandry ny fifandraisana.
Raha mikasa ny hanao asa any UAE ianao, tokony hanomboka hijerena ny mombamomba ny media sosialy ianao. Tokony ho matihanina; Halaviro ny sary sy ny lahatsoratra izay mety hampandefitra ny tsy fivadihanao. Ny mpampiasa iray dia afaka manadino fahatokisan-tena miaraka aminao na manisy fiheverana ratsy momba ny toetran'ny lahatsoratra ao amin'ny media sosialy.
Ary koa, manakarama amin'ny alàlan'ny mombamomba ny media sosialy toy ny LinkedIn ny mpampiasa. Tokony hampifanarahanao amin'ny mombamomba anao ny mombamomba anao mba hifanaraka amin'ny takian'ny mpampiasa sy ny antenaina. Ao amin'ny mombamomba anao, amboary ny votoatiny miaraka amin'ny teny fanalahidy manokana mifandraika amin'ny maha-mahay anao. Mandany fotoana amin'ny haino aman-jery sosialy ny mpiasa mandritra ny fizotran'ny asa mba hanombatombana ny matihanina sy ny fahaizan'ny mpandray mpiasa tsirairay. Izay lahatsoratra tsy ilaina sy fialamboly izay afaka mampandefitra amin'ny sarinao dia tokony hesorina.
Fomba feno amin'ny tranokala
Ny ankamaroan'ny orinasa any UAE dia mitaky anao hameno ny antsipirihany ao amin'ny tranokala tsirairay. Ny ankamaroan'ny ny antsipiriany dia toa tsy ilaina sy mankaleo, aza avela hikorontan-dry zareo ireo. Ireo orinasa dia mety tsy maniry ny hanavao ireo endrika mba hifanaraka amin'ny filana fandraisan'antoka samihafa izay midika fa andrasany anao hanome ny antsipiriany rehetra. Mahasorena ny mamerina ny antsipiriany sasany mila manao izany ianao raha tsy maintsy mahazo asa any UAE.
Araho ny manaraka ireto torohevitra 4 ireto mba hiantohana asa tsara any UAE.
Ny fanjakana faharoa an'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) raha ny habeny, Dubai, dia haben'ny toekarena manerantany. Betsaka ny olona manasa-tena hitady asa any amin'ny faritra indrindra amin'ny tombontsoa mety ho azon'izy ireo eto, anisan'izany ny mizana karama tsara, ny kolontsainan'ny asa lehibe, ny fomba fiainana miramirana, ny vola tsy mandoa hetra ary ny tarehiny mampitolagaga. Iray amin'ireo fanjakana malalaka indrindra fantatra amin'ny taham-pandrosoana avo lenta izy. Mety ho an'ny mpanondrana fananana fananana ao amin'ny fanjakana fanjakan'i Dubai aza, tsy toy ny firenen-kafa any Atsinanana. Izay no mahatonga an'io iray amin'ireo safidy voalohany ho an'ny mpikaroka amin'ny asa rehetra manerana izao tontolo izao hitady asa any amin'ity faritra ity.
Ny ankamaroan'ireo firenena mandroso any Afovoany Atsinanana dia miankina amin'ny solika ihany no sehatra voalohany ho an'ny toekareny. Saingy ny zavatra hafa ho an'i Dubai dia hafa. Betsaka ny indostria hafa mivoatra ankehitriny any Dubai, mahasarika ireo mpitady asa avy any Polonina, India, Pakistan, Bangladesh ary faritra maro hafa ao Azia hiasa amin'ireo sehatra mitombo. Ny indostrian'ny indostria lehibe ankoatry ny solika sy ny entona amin'izao fotoana izao ao Dubai dia ny fizahantany, fananganana, serivisy ara-bola ary trano tena betsaka.
Ny karama ambony sy trano fividianan-ketra dia mahatonga an'i Dubai ho iray amin'ireo safidy ambony indrindra amin'ny expats hisafidy Dubai ho iray amin'ny toerana mahomby amin'ny asa. Mba ho marina, Dubai dia iray amin'ireo fanjakana mandoa vola ambony indrindra amin'ny faritra hafa rehetra ao amin'ny UAE. Ny karama dia afaka mitety faritra manodidina an'i AED 75,000 mandritra ny iray volana mandritra ny iray volana ho an'ny mpitantana ankapobeny ara-teknika na mpitantana ny rojiste miasa any amin'ny indostrian'ny injeniera, ny solika ary ny entona. Ny talen'ny zokiolona eo amin'ny sehatry ny fananganana dia afaka manangona vola manodidina ny AED 80,000 isam-bolana. Saingy ny sakam-panombohana amin'ny tambin-karama ho an'ny mpitantana sy ny injeniera dia afaka manelanelana eo amin'ny AED 12,000 ka AED 15,000 isam-bolana. Misy antony maro tokony hiankina amin'ny karama isam-bolana momba ny mpiasa mpikaroka. Ny tena fahita indrindra dia:
Na dia mety hahaliana ny fonosana karama amin'ny lafiny rehetra amin'ny asa ao amin'ny faritra, matetika dia misy vidiny fanampiny. Ny vidim-piainana dia avo ihany koa ary ilaina ho an'izay mitady mpikaroka ny raharaha. Manodidina ny AED 9000 isam-bolana raha hanofa trano 2 misy efitra fatoriana. Ny tahan'ny hafa aza dia avo be ihany koa ho an'ny olona tsy vita, ary manodidina ny AED 7000 ho an'ny trano fatoriana 2. Azo atao ny mahazo efitrano eny amin'ny ankamaroan'ny trano iraisana izay manorina manerana ny tanàna manodidina ny AED 2000.
Amin'ny vidin'ny vidin'ny solika sy ny fiarovana ny fiara, safidy lehibe ny mividy fiara fitaterana. Ny safidy amin'ny fampiasana fiara amin'ny volana isam-bolana dia manodidina ny AED 1500 ho an'ny fiara madinika kely. Raha toa ka mitaky manodidina ny AED 2 isaky ny kilometatra ny taxi, ny olona dia afaka manararaotra ny fiara fitateram-bàla ao an-tanàna amin'ny manodidina ny tahan'ny mitovy amin'ny dia.
Zava-dehibe iray lehibe hoheverina ho an'ny ankizy. Raha ny ankamaroan'ny olona dia mandany fotoana betsaka amin'ny asany am-piasana mba hanangona isaky ny AED, tsy misy sekolim-panjakana izay mitaky zaza manabe vola. Mitovy amin'ny protocol an'ny Governemanta fanjakana any Dubai. Izany no mahatonga sekoly tsy miankina sy iraisam-pirenena ihany no safidy ho an'ny expats mitodika any amin'ny fanabeazana ny paroany. Fa ny fandaniana amin'ny saram-pianarana sy ny sarany dia avo be, manomboka eo amin'ny AED 90,000 isan-taona, indrindra ho an'ireo sekoly iraisam-pirenena izay mitarika ao amin'ny faritra ho an'ny paroasy.
Toy ny firenena silamo hafa, herinandro miasa any Dubai maharitra manomboka ny alahady ka hatramin'ny alakamisy any amin'ny ankamaroan'ny indostria. Ho an'ireo toeram-pivarotana sy varotra manokana, ny herinandro fiasana dia manomboka amin'ny asabotsy ka hatramin'ny alakamisy, zoma (andro masin'ny silamo) izay faran'ny herinandro ho an'ny firenena silamo hafa. Ny ora fiasana dia fantatra koa ny miovaova amin'ny indostria mankany amin'ny indostria. Ny ora ara-barotra matetika dia manodidina ny 8 AM maraina maraina mankany 1 AM tolakandro, ary fitsaharana adiny telo. Avy eo dia hitohy amin'ny 4 PM ny asa ary hitohy mandritra ny ora 3 hafa hatramin'ny 7 PM Misy indray ny fiovan'ny orinasam-barotra iraisam-pirenena izay miasa amina famantaranandro 9 AM mankany 6 PM Misy ny fihenan'ny ora miasa mandritra ny volana Ramadany.
liana ireo mpikaroka momba ny asa dia afaka mitodika any amin'ny vavahadin-tserasera amin'ny asa an-tserasera sy maso ivon-toeram-pitadiavana hitady fotoana malalaka. Azon'izy ireo atao koa ny mampiasa ny tranokalan'ny orinasa hahafantatra bebe kokoa momba ny ambaratonga misy sy ny toerana misy azy ireo. Safidy hafa dia ny hahafantaran'ny namana, olom-pantatra na ny fiantsoana mangatsiaka mba hivoahan'ny sasany.
Jobs In Dubai - Inona no tokony hofidiana?
Izy io dia manonofy olona marobe hipetraka sy hiasa ao amin'ny fanjakana fanjakan'i Dubai. Saingy mety ho sarotra ny mametraka asa tsara ao raha tsy ampy fahalalana marina ny mombamomba ny fomba fiasa any UAE. Nahita fanehoana fototra momba ireo tranga tena manan-danja fna asa sy asa any amin'ny faritra.
Dubai dia iray amin'ireo mpikambana manana ny maha izy azy amin'ny 7 emirates an'ny United Arab Emirates (UAE). Emir, mpitondra mahaleo tena no mifehy ny faritra filoham-pirenena, izay misy ao amin'ny faritany atsimon'i Guinemane Persianina. Rehefa tonga any amin'ny faritra manankarena ao UAE, Dubai dia iray amin'ireo mpitarika ao anaty lisitra.
Ny indostrian'ny solika dia mitohy no voho-toekarena ao amin'ny faritra. Ny harena lehibe indrindra ao Dubai dia noho ny harena be dia be amin'ny menaka voajanahary. Ny tahiry lehibe dia manana nivadika Dubai ho iray amin'ireo mpamokatra solika lehibe amin'ny tsena manerantany i Dubai. Na dia namolavola ho an'ny toekarena emirate aza izy io, tsy nino afa-tsy ny niankina taminy mihitsy i Dubai noho ny fitombony. Misy sehatra hafa miroborobo be dia be mahatonga ity toerana ity ho iray amin'ireo faritra mitombo haingana be erak'izao tontolo izao. Ireo sehatra hafa izay miroborobo amin'izao fotoana izao i Dubai dia misy:
Information Technology (IT) eo amin'ny maro hafa.
Miaraka amin'ny firongatry ny sehatra an-dalam-pandrosoana maro, I Dubai dia nampiditra ny sain-dàlana ho an'ireo tombontsoa maro tsy tambo isaina. Ankoatra izany, ny tahan'ny karama ambony, ireo asa mahasoa ireo dia manasa ireo mpikaroka asa tsy tambo isaina isan-taona. Amin'ny fahazoan-dàlana tsara sy ny haavo fanandramana, ny mpilatsaka hofidina dia afaka manararaotra ireo asa ireo. Ny asa dia mitaky fahaizana miteny anglisy amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Ireo kalitao takiana amin'ny asa
Tsy mitovy ny fepetra takian'ny sehatra tsirairay. Ny fenitra iraisan'ny ankapobeny dia:
fanabeazana - Ny rafi-pampianarana dia miorina amin'ny andro hafa izay mampiakatra ny isan'ny asa fampianarana. Ny mpirotsaka dia tsy maintsy manana mari-pahaizana licence momba ny lohahevitra rehetra miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra farafaharatsiny mba hampiharina amin'ny asa. Mazava ho azy fa ilaina ny mari-pahaizana B.Ed. Ireo mpifindra monina manana traikefa amin'ny fampianarana ao amin'ny Institiota fianarana (any amin'ny toerana rehetra) dia azo inoana kokoa ny manao ny asa.
IT - malaza amin'ny alàlan'ny tontolon'ny tontolony sy ny fitantanan-draharahany i Dubai. Nanentana ireo orinasam-pifandraisana IT malaza be hanokatra base any amin'ny faritra izy io. Ireo mpilatsaka hofidina manana mari-pahaizana bakalorea na fahazoan-dàlana amin'ny sehatry ny fangatahana solosaina hampihatra ny asa IT any amin'ny ankamaroan'ny orinasa IT malaza ao amin'ny faritra anisan'izany ny IBM, Oracle ary Microsoft. Ny mari-pahaizana diplaoma momba ny fahaiza-manao rehetra avy amin'ny andrim-panjakana malaza dia manatsara ny fotoana hisafidianana azy. Ireo mpifaninana manana traikefa momba ny 4 + taona no ankafizina kokoa.
Antsinjarany - Dubai dia fantatra ihany koa fa renivohitra miantsena eo amin'ny faritra Afovoany Atsinanana rehetra, indrindra amin'ny fiakaran'ny isam-barotra an-tsena ao amin'ny faritra. Amin'izao fotoana izao, misy tranombarotra maoderina 70 sy fivarotana departemanta, fivarotana ary boutiques miasa any amin'ny faritra. Ny mari-pahaizana MBA avy amin'ny andrim-panjakana malaza dia iray amin'ny fototra fepetra takiana amin'ny kitapo asa tsara amin'ny indostrian'ny fivarotana. Ny mari-pahaizana diplaoma amin'ny fizotran'ny fitantanana fivarotana dia mampitombo ny mety hisafidianana.
Hospitality - Ireo mpifaninana izay manana ny mari-pahaizana bakalorea amin'ny fitantanana ny hôpitaly dia mendrika mangataka ireo asa isan-karazany amin'ity sehatra ity.
Joba any Dubai
Ny fomba tsara indrindra hitady asa any Dubai dia amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera amin'ny asa an-tserasera. Ireo tranonkala natokana ho an'ny asa ireo dia mamela ny mpampiasa hikaroka asa mifototra amin'ny firenena. Ireo mpampiasa dia afaka mijery azy ireo mba hitady ny tolotra Dubai hitan'izy ireo mahasarika. Google , mazava ho azy, safidy hafa mampanantena mba hamonjy ezaka sy fotoana. Ny mpampiasa dia takiana hamorona kaonty amin'ireto tranonkala ireto izay tonga tao amin'ny lisitry ny fikarohana mba hisoratra anarana ny tenany ary alao ny fangatahana tolotra ho an'ny serivisy asa marobe. Na dia manolotra serivisy maimaimpoana aza ny ankamaroan'ny tranokala miasa, ny fidirana miaraka amina fidiram-bola miaraka amin'ny famandrihana no mandoa ny fotoana mety hahitana ireo fotoana mety indrindra.
Mpanolotsaina momba ny asa momba ny asa ao Dubai
Fomba iray hafa ahafahan'ny mpitady asa matetika izany ho an'ny vahaolana mahomby amin'ny asa any Dubai. Betsaka ny isa maso napetraka ao amin'ny emirates izay manolotra fanampiana amin'ny mpitady asa. Raha vao manome ny antsipirihany ny orinasa - ny famerenana sy ny taratasy fanamarinana (fanabeazana sy matihanina) ireo mpilatsaka ho fidiana dia hikaroka ny asa tsara indrindra mahomby araka izay tratry ny kandidà. Manolotra maro izy ireo serivisy hafa toa ny toro-hevitra momba ny fanoratana ny resy, ny torolàlana momba ny fahatsinjovana asa any amin'ny faritra, fiandrasana ny fananganana karama ary mametraka mombamomba marobe amin'ireo serivisy hafa. Ny ankamaroan'ny orinasa dia manefa mpirotsaka hofidiana kely ny mpilatsaka hofidiana amin'ny fanampiana isan-taona.
Fomba lehibe hahazoana asa azo antoka ao Dubai
I Dubai angamba no iray amin'ireo toerana vitsy navela eto an-tany izay misy fampirantiana fampiasa miasa. Izany farafaharatsiny izany no tsapany amin'ny mponina any amin'ny faritra hafa eran-tany, anisan'izany i India, UK ary Etazonia indrindra fa aorian'ny fitsipiky ny fahatapahan'ny asa matetika avy amin'ny ankabeazan'ny orinasa malaza mandritra ny fandrahonana ny fivoaran'ny toekarena.
Noho izany dia misy ny hafanam-po amin'ny fiasana any ivelany, indrindra ho an'ny Dubai, ny fanjakana Afovoany Atsinanana indrindra ao amin'ny United Arab Emirates. Ity no antony satria ilay toerana dia manolotra hetra alaina amin'ny hetra fomba fiainana amin'ny mpitantana manerantany. Ny mpampiasa avy any Dubai dia mbola manana fatana fandoroana ho an'ny olona rehetra manam-pahaizana rehetra eran'izao tontolo izao amin'ny asa maro.
Fa ny fanontaniana lehibe izay mbola misy dia ny fomba ahazoana miasa sy visa iray handehanana sy hiasa any toy ny mpiasa Alzeriana. Mba hamahana ity olana ity dia nahafantatra ireo fomba fanta-daza izay tadiavin'ny mpikaroka asa iraisam-pirenena mitady asa tsara isika dia iray amin'ireo toerana irina indrindra eto an-tany.
Ny ankamaroan'ny fikambanana miorina ao Dubai dia manao famerenana mavesatra isan-taona, indrindra avy amin'ireo faritra toa an'i India sy UK. Ny fitrandrahana asa dia atao amin'ny toerana toy izany isan-taona. Izany dia tonga amin'ny fotoana iray hitsidihana sy hihaona amin'ireo mety ho mpitrandraka ho an'ny indostria mifanentana mba hahitana hoe inona no karazana asa omena. Anisan'izany ny fahafantarana ny fonosana karama ary ny sisa rehetra misy. Ireo mpikaroka momba ny asa dia afaka mitodika any amin'ireo mpanome serivisy manam-pahaizana manokana momba ny famindra toerana iraisam-pirenena ary manangona fahalalana vitsivitsy momba ny fahazoana visa ho ampio izy ireo handeha sy hiasa any amin'ny fanjakana voalohany. Ireo fampirantiana ireo dia manome olona maro hitadiavana fiainana vaovao ary hanangana ny asany any Moyen Orient. Iray amin'ireo fomba tsara indrindra azon'ny olona iray ny nahazoany ny antsipirihan'izy ireo amin'ny mpampiasa avy amin'ireo sehatry ny asa.
Izany dia fomba iray hafa mora hitadiavana takelaka misy sy fahafahana misokatra any Dubai. Betsaka ny Dubai miorina sampan-draharaha misahana asa fanolorana asa manome safidy mety ho an'ny kandidà hanana mombamomba mety. Afaka mifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny tranokala izy ireo ary mangataka ny serivisin'izy ireo. Ny masoivoho sasany dia napetraka ihany koa any amin'ireo firenena toa an'i India sy Pakistan izay miasa amin'ny fanomezana asa fanampiana ho an'ny mponina ao amin'ilay toerana hahazoana tombontsoa mifototra ao Dubai. Ireo masoivoho ireo dia mety handoa sarany isan-taona ho an'ny serivisy marobe atolotry ny mpikaroka asa ary ao anatin'izany ny toro-hevitra momba ny fanoratana ny resy ary ny fanaovana izay mahamora ny kandidà amin'ny fomba mety. Betsaka ny vavahadin-tserasera amin'ny sehatry ny asa an-tserasera ary koa izay tadiavin'ny mpitady asa. sasany Ny vavahady dia natokana manokana ho an'ny asa miorina any Afovoany Atsinanana ary tonga amin'ny safidy iray izay ahafahan'ny mpampiasa mitady ny asa rehetra mifototra amin'ny firenena haleha.
Tariby lavitra amin'ny mpampiasa
Azo atao koa ho an'ny mpikaroka momba ny asa manerana izao tontolo izao mba hifandray akaiky amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny orinasa sy ny antsipirian'ny fifandraisana hafa. Mety ho dingana mandany fotoana izany tsy misy fandraisana fanamafisana fa kosa mitady ireo mpikaroka amin'ny asa noho ny fanaintainan'ny fitsidihana miverimberina hatrany amin'ireo maso ivoho asa sy ny fiampangana azy ireo. Ary misy koa ireo masoivoho sandoka sasany izay mety tsy hanome serivisy tena misy na eo aza ny fiampangana ny serivisy. Manakana ny mpifaninana tsy ho tratran'ireo masoivoho toy izany ireo mpampiasa karama manamafy ny fotoana tena azo ampiharina omen'ny fikambanana. Ireo mpiadina dia afaka mikaroka ny tranonkala amin'ny indostria mifanentana amin'ny sehatry ny sehatra manokana ary hikaroka izay rehetra / misy misokatra rehetra azo alaina amin'izao fotoana izao ho an'ny asa miverina miasa any Dubai. Ireo mpilatsaka hofidina dia afaka mampihatra fotsiny amin'ny alàlan'ny tranokala amin'ny alàlan'ny tohiny sy taratasy fangatahana manonona ny fahazoan-dàlana rehetra, ny fahaiza-manao ary ny fahaiza-manao ary ny mahatonga azy ireo ho mendrika ho an'ny asa. Raha liana ny mpandray vola dia hifandray mivantana amin'ny kandidà izy ireo, mitsitsy ny tompon'andraikitra amin'ny mpampivelona.
Toerana ara-batana eo amin'ilay toerana
Na dia toa tsy mahomby aza izany, dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hitadiavana asa any Dubai. Mety mila ezaka sy fandaniam-bola be izany fa manatrika ara-batana ho an'ny asa fikarohana no mety ho safidy tsara indrindra hitady ny fotoana mety any UAE. Ireo mpilatsaka hofidina dia afaka mizaka ny tohin'izy ireo miaraka amin'ny antsipiriany momba ny fahazoan-dàlana, ny fahaiza-manao ary ny antontan-taratasy hafa mba hijerena manokana ny fandaminana ary hanao fangatahana ara-batana amin'izay mety ho hita eo amin'ny sehatra misy. Ny fandaharam-potoana miasa dia mety miovaova arakaraka ny fandrindrana misy ny fikambanana miorina amin'ny karazana orinasa. Raha ny orinasam-barotra sasany eo an-toerana dia miasa amin'ny famantaranandro iray 8 AM mankany 7 PM miaraka amin'ny fiatoana mandritra ny ora 3, ny orinasa anatiny dia miasa amin'ny famantaranandro 9 AM mankany amin'ny famantaranandro 6 PM. Miaraka amin'ny zoma ho faran'ny herinandro ofisialy ho an'ny rehetra, ny sehatra sasany dia miasa amin'ny tsingerin'ny herinandro ny alahady ka hatramin'ny alakamisy koa.
Ireo no fomba tsara indrindra ahazoana asa any Dubai. Ny fomba hafa dia tafiditra ao anaty tambajotra manokana na amin'ny alalàn'ny dokam-barotra an-tseraseran'ny orinasa.
Inona no mahasambatra an'i Dubai Ny safidy tsara indrindra ho an'ny mitady asa any ivelany?
Dubai, iray amin'ireo mpamokatra solika lehibe eto an-tany dia iray ihany koa mpanome asa mitarika amin'izao fotoana izao ho an'ny asan'ny seranam-piaramanidina. Noho izany dia maro ny lafin-javatra nampidirina mba hahatonga ny fanjakana fanjakan'ny United Arab Emirates ho iray amin'ny safidy voalohany amin'ny mpitady asa eran'izao tontolo izao. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo antony lehibe nanova an'i Dubai ho toeran'ny asa nofinofin'ireo kandida maro.
Io no iray amin'ireo antony lehibe tsy ankasitrahan'ny ankamaroan'ny olona na manadino. Ity indrindra dia satria arakaraka ny fandoavantsika ny vola an-tsakany sy an-davany ho an'ny governemanta ka tsy heverintsika mihitsy hoe hatraiza ny haben'ny enta-mavesatra, indrindra any amin'ny toerana sasany izay mety mitombo ny tahan'ny hetra amin'ny 40% fidiram-bola. Midika izany isaky ny dolara azontsika, takiana ny mandoa vola 40 ny manampahefana ary mahazo afa-po amin'ny cn 60 na eo aza ny asa fanoloran-tena rehetra sy ny asa mafy ataontsika. Rehefa dinihina amin'ny marika macro dia lojika lojika dia miasa maimaim-poana amin'ny ampahany sasany amin'ny taona isika ary ny faharetany dia mety ho iray volana ka hatramin'ny efatra eo ho eo amin'ny toerana misy anao. Ny ankilany kosa dia i Dubai dia fantatra betsaka amin'ny fanafoanana ireo vola mivoaka amin'ny vesaran'ny hetra miditra amin'ny vola, noho izany dia mamela azy ireo hankafy ny asany mafy rehetra sy ny fanoloran-tena ho tanteraka indrindra.
Betsaka kokoa ny fonosana
Ny antony lehibe ananan'ireo kandidà rehetra manerana izao tontolo izao dia maniry ny hiditra amin'ny asa mifototra ao Dubai dia ny fonosan'ny valim-bidy amin'ny ankapobeny. Amin'ny ambaratonga ankapobeny, ny fonosana dia mirona 20% avo noho ny ankamaroan'ny firenen-kafa. Politika io dia nampidirin'i Dubai hametahana ny talenta tsara indrindra avy amin'ny eran-tany. Noho izany, miaraka amin'ny vola azo amin'ny hetra tsy mitaky hetra dia mitana vola be dia be. Ohatra, misy olona mahazo $ 100,000 ao anatin'ny herintaona ary mandoa 40% hetra dia mandray an-trano afa-tsy 60,000 $ isan-taona ihany. Ho an'izay kandida mitovy, Mandoa vola $ 120,000 i Dubai ary miaraka amin'ny hetra noloa, mitana izany rehetra ny kandida. Izany dia am-bidy indroa ny vola vidiny am-pifaliana rehefa avy mandoa ny hetra izy. Raha ara-teknika dia 20% fotsiny ny fandoavam-bola izay iasanao aminao, amin'ny faran'ny andro dia mankafy karama indroa ianao amin'ny antony azo ampiharina.
Taratasy sy famerenana
Amin'ny traikefa sy ny toerany, tongava valiny sy valisoa. Raha injeniera na mpikarakara ny fidirana amam-pahalalana dia mahazo karama isam-bolana eo amin'ny AED 10,000 ka AED 15,000 arakaraka ny fahazoan-dàlana ananany, ny talen'ny teknika dia afaka miditra ao amin'ny AED 80,000 amin'ny tsingerim-bolana isam-bolana. Etsy an-danin'izany, misy tombony maro hafa izay omen'ny mpampiasa amin'ny mpilatsaka ho fidiana manomboka amin'ny trano malalaka, fitateram-bolan'ny finday, trano fikarakarana, tapakila tokana isan-taona isan-taona ary maro hafa. Ho an'ny kandidà efa mahazo $ 120,000, ny vinavina ho an'ny trano fonenana maimaimpoana, ny fitaterana ary ny fitaovana hafa rehetra dia manodidina ny $ 10,000 na mihoatra. Na dia mila fifampiraharahana mafy ho an'ireo mpifaninana amin'ny fidirana aza, miaraka amin'ny vanim-potoana sy ny traikefa ireo zavatra ireo dia natao ho an'ny kandidà fotsiny eny amin'ny làlamben'i Dubai. Midika izany fa tsy dia manam-bola hikarakarana azy izy ireo ary ny karamany rehetra dia azy, miaraka amin'ny tombontsoa fanampiny fanampiny.
Fialan-tsasatra sy kalitaon'ny fiainana
Ny ankamaroan'ny fikambanana amin'ny ankapobeny dia manolotra ny andro fitsingerenan'ny andro 2 amin'ny ora 8 amin'ny ora fiasana. Ireto ny mahafinaritra kely. Ny ampahany tsara indrindra dia ireo mpilatsaka hofidina aza dia afaka mankafy fialantsasatra mandritra ny iray volana mba hamangy ny tranony ary handany fotoana tsara miaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany. Miaraka amin'ny fifampiraharahana eo amin'ny tapakila an-tserasera tsy takatry ny ankamaroan'ny kandidà, ny nofinofy ao Dubai dia nofinofy ankamamiana maro. Ho fanampin'izany, ny fahafaham-po amin'ny asa azon'ny kandidà avy amin'ny asa miorina ao Dubai dia tsy misy fifaninanana. miasa amin'ny tranobe tsara indrindra, ny maritrano na ny indostria tsara indrindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mampiroborobo ny fahatokisana eo amin'ny kandida. Vao mainka izy io dia nohamafisin'ireo fihenam-bidy mora kokoa sy ny vidin'ny solika izay zatra ny olona mankafy ny fiainany hatramin'ny farany na dia eo aza ny fandaharam-potoana mahazatra.
Ireto ny tena lafin-javatra izay mahatonga an'i Dubai ho iray amin'ireo safidy mafana indrindra ho an'ireo kandidà iraisam-pirenena mba hampivoatra ny fahasambarany. Misy fomba marobe ahafahan'ny mpikaroka miasa amin'ny fantsom-baravarana amin'ny sehatra mifandraika amin'izany. Ny vavahadin-tserasera an-tserasera, ny masoivoho mpitrandraka sy ny expos amin'ny asa no fomba mora indrindra ho an'ny mpikaroka amin'ny asa mitady ny mombamomba mety azon'izy ireo ampiharina. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tranokalany na ny antsipirian'ny fifandraisana hafa sy ny rakitra ao amin'ny fampiharana an-tery. Ny dokambarotra amin'ny fitrandrahana dia mety ho safidy hafa hahafantatra bebe kokoa momba ny fotoana mety azo alaina.
Ny sehatry ny asa mahafa-po indrindra ao Dubai
Manomboka amin'ny Dubai World Trade Center mankany Burj Khalifa ary ny zava-drehetra eo anelanelan'ny Dubai. Izy io dia amin'ny lafiny habe sy faharoa raha ny amin'ny mponina eo amin'ny rahalahin'ny Emirates any UAE. Tsy i Sheikh Maktoum bin Buti al Maktoum, miorina ao amin'ny 1833 ihany iray amin'ny faritra lehibe indrindra ao amin'ny faritra nefa koa toeram-pivoarana malaza ho an'ny orinasa. Ny toerana mety amin'ny fanjakana dia mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny orinasa manerantany indrindra indrindra amin'ny sehatry ny solika sy ny angovo, ny ara-bola, ny fizahantany ary ny maro hafa. Mipetraka any amin'ireo faritra atsimo-atsinanan'ny Golfa Persiana, izy io dia iray amin'ireo toerana irariana asa irariana indrindra eo amin'ireo mpitady asa iraisam-pirenena, indrindra ho an'ny tombontsoa omeny amin'ny sehatra isan-karazany.
Ny sehatrasa asa goavana indrindra ao amin'ny fanjakana dia ahitana:
Iray amin'ireo indostria lehibe indrindra any Dubai izy io na dia tsy izy irery aza no sehatra ho an'ny toekaren'ny firenena. Ny fahitana voalohany solika tany amin'ny faritra dia nanomboka tamin'ny taona 50 ary ambany dia ambany. Taty aoriana dia nisy ny zavatra hitan'ny maso nanjary lasa iray amin'ireo mpamokatra solika lehibe ary efa nanova ny toerana ho toeram-pialofana ho an'ny mpikaroka asa iraisam-pirenena manerana ny globe. Noho ny famokarana be dia be avy amin'ny indostrian'ny solika dia misy sakana lehibe misokatra ho an'ireo kandidà mahafeno fepetra hanatevin-daharana ny sehatra ary hitondra fitomboana fatratra ho an'ny asany. Ny sehatry ny sehatra aza dia manome valisoa lehibe ho an'ireo mendrika azy sy ny karama farany ambany indrindra ho an'ireo injeniera sy mpitantana amin'ny haingam-bokatra manodidina ny 12,000 mankany 15,000 AED. Ny ambaratonga ambony indrindra dia mety manodidina ny 80,000 AED na avo kokoa ho an'ny talen'ny teknika ao amin'ny orinasa. Ny fonosana karama karama dia afaka miovaova miankina amin'ny fepetra, ny traikefa ary ny zom-pirenena amin'ny kandidà.
Indostrian'ny goavambe iray hafa ao amin'ny Emirate d'Evato izy io ary manome volan'ny vola any ivelany. Nisondrotra be ity indostria ity ary miankina tanteraka aminy ny firenena amin'ny fanamafisana ny toekareny amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Na dia avy any amin'ireo tsenambarotra aza ny fidiram-bolan'ny lehibe, ny rafitry ny maoderina sy antikony dia mahasarika mpizahatany vahiny maro be koa. Fantatra ihany koa fa renivohitra miantsena ny vondrona firenena Afovoany Atsinanana rehetra, omena toeram-pivarotana sy fivarotana lehibe, boutika ary orinasa hafa i Dubai. Miaraka amin'ny fananganana ireo rafitra vaovao, ireo mpizahatany maro dia miditra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra na fitsangatsanganana kely ary mandany vola be dia be izay mitarika amin'ny fisondrotry ny toe-karena. Ny tena mampiavaka ny hoe ny indostrian'ny solika sy ny solika dia tsy misy afa-tsy 6% amin'ny GDP an'ny emir. Mandray anjara amin'ny ampahany ankavia ny fizahantany. Izany no antony, call center dia iray amin'ireo safidy voalohany ho an'ny mpikaroka amin'ny asa sy hanatevin-daharana ny fandraisana anjara amin'ny indostria amin'ny fitombon'ny haren'ny firenena. Misokatra ny sehatry ny sehatry ny sehatry ny sehatry ny mpifaninana ary koa ireo mpilatsaka za-draharaha hiaraka ary hankafizana ny fitomboan'ny asa.
Araka ny efa voalaza dia, mamontsina tanteraka ny firenena ny fananganana rafitra maoderina. Miaraka amin'ireo trano fitehirizam-bokatra mankany amin'ny tranobe, avy amin'ny ivotoeram-pampianarana ho amin'ny toeram-piasana, ny vaovao dia vaovao tanteraka ary betsaka ny fikasana hiakatra. Izany no mahatonga azy ho iray amin'ny indostria tsara indrindra ho an'ny mpifaninana mpifindra monina, indrindra avy amin'ny sehatry ny maritrano sy ny injeniera sivily ho avy ary haneho ny fahaizany ao amin'ny fanjakana amerikanina Emirates Arabo. Kandida manana fepetra takina sy traikefa takiana azo ampiharina mora foana ho an'ny toerana misy rehetra tsy misy hidy.
Ny fiakaran'ny fizahantany dia nanome ny fiakaran'ny tranom-barotra na ny fiakaran'ny tranom-barotra an-tsena dia efa nanao ny lalana ho amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fizahan-tany dia tsy mazava. Ny zavatra iray mazava dia mazava fa nisy ny fanenjehana tampotampoka teo amin'ny sehatry ny fiantsenana, misaotra ny mpizahatany ary ireo mpanafika mpividy any Dubai. Maherin'ny tranombarotra 70 miorina ao Dubai tato ho ato ary mitaky izany Fifandraisana iraisam-pirenena mifandraika amin'ny fangatahana amin'ny asa. Na dia fahazoan-dàlana MBA aza ny fepetra fatra farany ambany ho an'ny kandidà iray, ny mari-pahaizana diplaoma amin'ny taranja fivarotana dia mazava ho azy fa afaka manampy azy ireo hanana asa lehibe ao amin'ny sehatra. Amin'ny traikefa ampy, ny karama, ny fidiram-bola ary ny fitaovana hafa dia mety ho avo be.
Ireto ny sasany amin'ireo sehatra malaza indrindra izay amin'izao fotoana izao dia manintona be dia be ny kandida vahiny ho amin'ny asa misokatra ho an'ny asa. Ny sehatra hafa toa ny sehatry ny fanabeazana sy ny sehatra IT dia mandray anjara betsaka amin'ny fanomezana ny tombontsoa ho an'ny kandidà mety. Ankoatr'izay, ny serivisy ara-bola sy ny serivisy mifandraika dia mahasarika ireo rindranasa be dia be avy any ivelany.
Torohevitra mba hiarovana ny asa tsara indrindra any Dubai
Mbola manohy ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpikaroka expat manokana i Dubai indrindra amin'ny tombontsoa tsy takatry ny atolotry ny mpifaninana. Miaraka amin'ny fidiram-bolan'ny hetra dia mitombo ny taham-bolan'ny ankapobeny, zaridaina marobe ary trano hafa, tsy mitsaha-mitombo ny fahafaha-miasa amin'ny sehatry ny faritra maro any Dubai. Ankoatr'izay, satria iray amin'ny sehatry ny fizahantany fizahan-tany sy fanjakana an-dalam-pandrosoana, ny sehatra isan-karazany dia nanokatra fehezanteny maro ho an'ny kandidà manerana izao tontolo izao. Ny sehatry ny fivoarana lehibe ao amin'ny faritra dia ahitana ny fananganana, trano sy fivarotana, fivarotana varotra ary serivisy maro amin'ireo sehatra hafa. Manome fahafahana i Dubai ho an'ny expats rehetra dia mampitombo fampiroboroboana ny sarin'ny asany ary manampy amin'ny fanandramana asa iraisam-pirenena sasany. Ireto ambany ireto ny torohevitra vitsivitsy hanombohana fomba fiasa amin'ny asa ho an'ny asa any Dubai.
Misafidiana amin'ny sehatra havanana
Tsy maninona na ny mpangataka dia kandidà lisitry ny fidirana na efa za-draharaha raha mbola mitaky ny mombamomba tsara. Anisany amin'ireo sehatry ny fampandrosoana marobe ao Dubai, ilaina ho fantatry ny mpikaroka momba ny tena mety aminy. Ny indostria tsirairay dia manana sehatra maro sy sehatra rehetra mahita fampiharana amin'ny indostria marobe. Zava-dehibe indrindra ho an'ny mpitady asa ny manapa-kevitra amin'ny safidy hentitra. Azoko atao tokoa ny mampisafotofoto ny mpifidy hifidy. Na dia maro aza ny maniry hiasa amin'ny indostrian'ny orinasa manokana satria maniry, ny sasany te hiditra amin'ny sehatra iray manokana satria voaofana ho amin'izany izy ireo. Na izany na tsy izany, ny fahazoan-dàlana dia manan-danja ho an'ny asa matihanina any Dubai amin'ny alàlan'ny asa atao amin'ny fahaiza-manao.
Mifandraisa amin'ny safidim-pamoizana
Misy safidy marobe azo alaina ho an'ny mpikaroka asa izay te-hangataka asa any Dubai. Afaka miditra asa izy ireo Fampirantiana izany dia atao isan-taona any amin'ireo firenena lehibe izay ataon'ny mpampiasa maka fandraisana mpiasa be dia be ao anatin'izany i India sy ny firenena maro hafa. Azon'izy ireo atao mihitsy aza ny misoratra anarana amin'ny vavahadin-tserasera maro samihafa natokana ho an'ireo mpikaroka asa na mijery ireo sokajy hahitana ny fotoana mety aminy. Safidy hafa dia ny fitsidihana ireo masoivoho mpitrandraka isan-karazany izay mety mandoa vola amin'ny serivisy isan-taona. Betsaka ny masoivoho sandoka tahaka izao no nanjary sarotra tamin'ny mpitady asa hahafantatra hoe iza no tokony hatokisana ary inona no antony. Ireo mpilatsaka hofidina kosa dia afaka mijery any amin'ny tranokala ofisialin'ny fikambanana ary mangataka fialan-tsasatra mifanaraka amin'ny taratasy firakotra ary tohiny izay manome ny antsipiriany rehetra. Tambajotra manokana toy ny namana sasany, ny fianakaviany na ny olom-pantatra hafa efa misy miasa any Dubai na Abu Dhabi dia mety ho safidy hafa hodinihina. Ireo mpikaroka momba ny asa dia afaka mandeha any Dubai mihitsy mba hikaroka manokana ny mombamomba mety mifanentana amin'ny maha-fahazoan-dàlana ireo.
Ho avy ny taratasy fanoratana lehibe
Iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny fizotran'ny asa fampiharana izy. Ny fanaovana ny taratasy firakotra izay manery ny mpitrandraka hahafantatra ny mpilatsaka hofidina dia andraikitra izay sarotra. Ny masoivoho dia tonga nanolotra serivisy toy izany amin'ny alàlan'ny saram-panompoana. Ny zava-dehibe roa no tena ifantohan'ny taratasy fanakonana. Amin'ny voalohany, ny fifantohana dia tokony hamaritana izay mahatonga ny mpifaninana hifanentana amin'ny asa. Ankoatr'izay dia ilaina ny milaza ihany koa ny antony tokony hifidianan'ny mpampiasa ny voafidy manokana ho an'ny kandidà hafa. Anisan'izany ny milaza izay tombontsoa fanampiny azon'ilay mpampiasa manantena hankafizana rehefa manakarama ny kandida. Ilaina ny miresaka amin'ny mpamaky ao amin'ny taratasim-taratasy firakotra araka izay azo atao, fotsiny ho an'ny fomba ara-psikolojika ahafahana mifandray.
Ho avy ny resume tsara
Ho an'ny fampiharana asa rehetra, ny resume no miresaka ho an'ireo kandidà. Io no dingana voalohany izay ahafantaran'ny mpandrindra ny Resadresaka momba ny asa. Ny fitrandrahana dia tokony hahitana ny tsipiriany rehetra momba ny mpikaroka asa, ka tafiditra ao anatin'izany ny fepetra momba ny akademika, ny traikefa taloha, ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana, ny tetikasa ary ny tsipiriany hafa fototra. Na dia mety tsy mitovy karazana amin'ny format malalaka aza ny format malalaka dia mety ho safidy ratsy ao Dubai ny fanatsarana ny pejy iray amin'ny pejy iray. Na dia miankina amin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manaon'ilay kandidà aza ny habeny dia mety hahavokatra raha toa ka tsy azo atambatra ny telo. Ilaina ny ahitan'ireo mpikaroka asa ny fahamarinana rehetra ho toy ny fireharehana na fanitarana zavatra mety tsy hahavery ny kandidatin'ny asa mitady.
Raha misy Ilay mpitady asa dia handeha any Dubai hitady asa ara-batana, mety tsy hitovy ny zavatra ary somary sarotsarotiny kokoa satria tsy hanana ny hitari-dalana azy ireo. Saingy raha mampihatra amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera, tranokala, expos na masoivoho, dia afaka miandrandra ny fitarihana toro-làlana amin'ny fivoaran'ny fomba fampiharana ny kandidà.
Tolo-kevitra ho an'ny Joba any UAE
Ny dinidinika dia ampahany manan-danja indrindra amin'ny fampiharana amin'ny asanao. Aorian'ny fanamboarana ny CV tsara indrindra, ny taratasy firakotra ary atolotra azy ireo isaky ny fe-potoana, dia tsy maintsy hiseho alohan'ny tontonana ianao. Ny mpanadihady dia mila manombatombana ny fahaizanao ary hametraka izay nolazainao tamin'ny CV. Ho an'ny mpampiasa maro, ny mari-pahaizana ho matihanina dia fototry ny fizotran'ny rindranasa fotsiny. Ny tena fototry ny dinidinika dia ny firotsahan'ny mpiasa mety hotsapaina raha ny toetra sy ny ny fahamalinana dia mety amin'ny kolontsaina sy firafitry ny orinasa.
Mila manaporofo ny tenanao ianao alohan'ny tontolon'ny tafatafa. Ny fomba itondranao ny tenanao isaky ny dingana isaky ny andro amin'ny dinidinika, manomboka amin'ny fotoana ahatongavanao amin'ny vavahady no mamaritra ny hiafaranao. Ny UAE dia anisan'ireo firenena faratampony manerana an'izao tontolo izao izay mampiditra haingana ny teknolojia. Tsy fantatrao mihitsy ny karazana dinidinika hanaiky anao; ny mpampiasa sasany te hisintona tampoka.
Fantatr'ireo mpampiasa fa efa miomana amin'ny fihetsika sy ny resaka ianao saingy te-hahazo ny tena maha-izy anao. Ny mpampiasa dia mila mahafantatra ny fihetsikao amin'ny tontolo samihafa. Ny CCTV dia tsikombakomban'ireo mpanadinadina, tsy fantatrao na oviana na oviana ny toerana hapetraka na ny fomba hametrahana azy. Izany no antony tokony hanombohanao amin'ny fiakanjo tsara sy fifampizarana tsara amin'ny rehetra avy amin'ny vavahady. Na dia tokony hikaroka aza ianao, dia mety tsy hahalala mihitsy ny lehiben'ny olona na olona hihaona aminao eo amin'ny tontonana.
Na izany aza, tsy tokony hatahotra ny dinidinika ianao. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hitazomana hihinana sy hatoky tena.
Fikarohana momba ny toerana misy anao
Tokony ho toerana manokana amin'ny toerana misy anao ianao. Fantaro izay takian'ny asa fa tsy ny fahaiza-manao mahazatra amin'ny orinasa ihany fa ny tian'ny mpampiasa hameno ny toerana. Ankoatra ny famaritana ny asa dia tadiavin'ny mpampiasa ny toetra manokana mifanaraka amin'ny toerany. Ny fahaiza-manao matihanina dia ampahany amin'ny zavatra tadiavin'ny mpampiasa ao amin'ilay asa, mety ho momba ny paozin'ny akanjo na ny fomba fiteninao. Na dia tsy tokony mody ho maimaimpoana miaraka amin'ny mpampiasa anao aza ianao dia tokony mifanaraka amin'ny fenitra andrasana.
Raha azo atao dia fantaro ny mpiasa teo aloha teo amin'ny toerana iray. Raha manana traikefa eny an-kianja ianao, manana safidy tsaratsara bebe kokoa amin'ny resaka asa. Tsidiho ary fantaro ny antony nandaozana ny mpiasa teo aloha sy ny haavon'ny tetikasa nangatahan'ny mpampiasa.
Ampidiro ao amin'ny famaritana ataonao izany. Ataovy azo antoka fa mahazatra anao ny zavatra andrasana rehetra.
Miresaha momba ny traikefanao
Aza resahina amin'ny fahaiza-manao matihanina sy izay nianaranao, fa resaho ny traikefa momba ny asa. Zarao amin'ny mpanadihady momba an'i zava-bita sy fanamby any amin'ny toeram-piasana. Fotoana iray hanaporofoanao fa mendrika ny asa ianao satria fantatrao izay ifandraisan'izany. Matetika ny mpampiasa any UAE dia mankasitraka ireo mpifaninana manana traikefa azo ampiharina eo amin'ny sehatra. Raha manantena ny hangataka asa ao anatin'ny volana vitsivitsy any UAE ianao, hampitombo ny fahaiza-manao, ary mahita toerana iray hanampy ny traikefanao, dia ilaina tokoa ny mitady asa any amin'ny firenena arabo.
Ny ankamaroan'ny mpikatsaka asa dia mamitaka ny fahaiza-manao matihanina amin'ny asa; Ny fampisehoana eo amin'ny toeram-piasana dia mitaky ny fampiharana ireo teoria amin'ny sehatra tena izy. Mandritra ilay tafatafa, io dia ny mpampiasa rehetra te-handre. Ny CV anao dia efa nanome anao fahafahana hanao dinidinika; Noho izany, raiso ho toy ny fahafahana hanazava bebe kokoa ny fahaizanao amin'ny traikefa. Ny resadresaka iray dia ny mandresy lahatra ny mpampiasa fantatrao ny asa sy ny tanjona.
Ankoatra ny famaritana ankapobeny momba ny asa mifototra amin'ny fepetra takiana, dia tokony ho fantatrao amin'ny zavatra andrasan'ny orinasa. Ny anjara asanao manokana rehefa tafiditra ao amin'ny ekipa ianao.
Na dia resahana amin'ny fomba roa aza ny resadresaka dia aza miteny be loatra. Avelao hifehy ny fivoriana ny mpanadina satria izy ireo no tompona. Na dia tokony hamolavola ny valin-teninao ianao sy hisorohana ny vagaozy aza, ny miresaka be loatra dia mety hionona amin'ny tontonana. Ankoatra izany, dia azo lazaina ho toetra maha-olom-pirenena izy io, izay mety tsy ho tsaratsara kokoa amin'ny asanao. Ny fitenenana be loatra toy ny fanadinadinana dia azo adika koa hoe mahantra amin'ny fitandremana torolalana satria tsy miresaka afa-tsy ny mihaino ianao. Ny tranokalan'ny tafatafa dia mety hanoratra aminao mora foana fa tsy asa be loatra.
Ankoatra izany, dia mety tsy hisy dikany ianao rehefa miresaka betsaka. Ny lelanao dia afaka mihisatra sy mampiseho toetra tsy fantatra. Na dia tokony hifantoka aza ianao ary hiditra amim-pahatokiana ilay mpanadinadina dia aza maika loatra. Fifandanjana izany.
Tokony ho tsara amin'ny lafiny rehetra ianao amin'ny famitana dinidinika. Mazava ho azy, tsy mandany fotoana hanaovana fikarohana sy fitafy ianao rehefa manantena ny tsy hahomby ilay asa. Na izany aza, tokony ho vonona ny hanaiky ireo endrika fanehoan-kevitra ianao. Tsy misy zavatra hita mibaribary tsenan'ny asa. Ny tsy asa dia tsy midika hoe tsy ampy amin'ny fomba rehetra ianao. Mety ho toerana iray izany ary kandida maro ianao ka izany no tsy maintsy avela. Ny fisaintsainana malalaka dia manampy anao hijanona ao anatin'ny famoizam-po, izay tsy mahaliana ny mpampiasa any UAE.
Zavatra 7 Tokony ho Fantatry ny mpikaroka iray any UAE
Ny UAE dia manana tombontsoa betsaka amin'ny asa. Na izany aza, tsy mazava ny fahitana asa ao amin'ny firenena arabo. Tsy maintsy mahatakatra ny kolontsaina, fangatahana manokana ho an'ny mpampiasa tsirairay ianao ary atolory amin'ny fomba tsara indrindra araka izay azo atao ny taratasinao.
Ankoatra ny fomba fijerinao matihanina, zava-dehibe ny mahatakatra ny tontolo iainana sy ny antenaina tsy amin'ny mpampiasa ihany fa ao amin'ny indostria sy ny kolontsaina. Ary koa, mila mifankafantatra amin'ny tontolo ara-dalàna ianao mba hisorohana ny mety hitranga mandritra ny fitadiavana asa.
Ireto misy zavatra manan-danja tokony ho fantatrao:
Amin'ny maha mpitady asa dia mety lavitra ny tontolonao io. Amin'izao fotoana izao, izay ilainao fotsiny dia asa sy karama manintona. Na izany aza, tsy ho ela ianao dia ho tonga eo amin'ny zava-misy fa mila miala sasatra ianao na farafaharatsiny fitsaharana. Indrindra, rehefa expatse ianao, dia ilaina ny fialan-tsasatra. Ny ankamaroan'ny orinasa any UAE dia mamela ny alimanaka 30 ho fialan-tsasatra isan-taona ho an'ny sesitany. Vola homena amin'ny fetin'ny besinimaro ianao rehetra, izay tsy ao anatin'ny andro 30. Ny fialan-tsasatra tsy voatanisa ao anatin'ny 22 andro fialan-tsasatra andoavam-bola.
Tena zava-dehibe ny miresaka amin'ireo andro fialantsasatra ireo mba handinihana ny fitsidihanao, tsy misy dikany ny halavirana mankany amin'ny tanindrazanao. Ny famakafakana izany dia hanampy anao hisoroka ny lohahevitra amin'ny fomba tsy mahafinaritra amin'ny mpampiasa anao.
UAE no firenena Arabo ka noho izany ny fampiasana be dia be ny fiteny arabo ho fiteny ofisialy eo amin'ny tontolon'ny orinasa. Ho hitanao amin'ny fiteny avy amin'ny fifanarahana momba ny asa raha hanofana fifanarahana ho an'ny trano fonenanao. Hahazo aina kokoa ianao raha manana hevitra momba ny fiteny ianao; noho izany, fahendrena ny mifankafantatra amin'ny fiteny amin'ny ampahany na amin'ny ankapobeny alohan'ny hifindra any UAE. Hanamora kokoa ny fiainanao izany.
Na izany aza, UAE dia firenena cosmopolitan izay manana mpiasa miasa nofehezin'ny expasriates. Ny Anglisy, Urdu, Hindi, ary Farsi dia mahazatra amin'ny fiteny vahiny hafa. Ary koa, ny ankamaroan'ny orinasa ao amin'ny indostrian'ny hopitaly ary ny fiaramanidina sy ny tranombarotra dia mitaky mpiasa hahalala fiteny maromaro.
VISA sy Pasipaoro
Amin'ny maha mpanatanteraka entana azy dia fepetra takiana fototra ny pasipaoro. Ankoatra izany, mila UAE VISA ianao, na mpizaha tany na mitsidika fotsiny ihany. Io dia hampiditra anao ao amin'ny UAE. Ilaina ny manana fahazoan-dàlana mandritra ny volana 3 farafahakeliny mialoha ny fidiranao. Ny fahazoan-dàlana maharitra na visa no havoaka any aoriana, raha mahazo asa ianao. Ny halavan'ny fahazoan-dàlana dia miankina amin'ny fifanekena.
Aorian'ny fiarovana ny asa manontolo andro sy miaina amin'ny maha-monina ao UAE, ny vadinao dia manana fahazoana asa maimaim-poana amin'ny asa sy asa fahazoan-dàlana hiasa any UAE.
Lasa firenena Arabo, Ny finoana silamo no fanjakazaka any amin'ny ankamaroan'ny tanàn-dehibe. Io no fivavahana ofisialy. Mila mianatra ny fototry ny fivavahany ianao mba tsy ho tafintohina mpampiasa. Farafaharatsiny, tsy hanomboka hifandray tanana amin'ny vehivavy, dia tsy mety izany. Na izany aza, ny mpampiasa any amin'ny tanàna lehibe toa an'i Abu Dhabi sy Dubai dia manaiky sy manaja ny fivavahana hafa.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny UAE ho malaza amin'ny matihanina ary manintona mpiasa goavana isan'andro dia noho ny rafitra fandoavan-ketra. Tsy misy haba. Ny fandaniana avo lenta any amin'ireo tanàn-dehibe tahaka an'i Dubai dia manondro ny isan-jato fanampiny amin'ny saram-panompoana. Mahazatra ny orinasa any amin'ny indostria fandraisam-bahiny izay mampiakatra ny vidin'ny 10% amin'ny faktiora. Tsy mahazatra ny any an-drenivohitry Emir any UAE noho ny fisian'izany ampahany betsaka amin'ny faktiora izany. Na izany aza, tokony hanamarina ny faktiora isaky ny mandeha ianao ary manolotena amin'ny toerana ilaina, indrindra raha tsy misy ny fiantohana ny serivisy.
Miasa amin'ny politika ny UAE. Raha toa ianao ka eo amin'ny lafiny ratsy amin'ny lalàna, na ny orinasa na ny tontolo iainana, aoka ho azo antoka fa handoavana sazy goavana ho an'ny tsy fanarahan-dalàna. Fitantanam-pitondrana ao an-toerana; Tsy misy marimaritra iraisana amin'ny lalàna raha tsy misy ny asanao. Amin'ny maha-mpikaroka anao, dia mety tsy te-hividy ny sarany tsy ilaina na rakitsoratra mahantra izay mety hanimba ny CV ianao. Ny mpampiasa dia tia ny etika sy ny etika. Aza manapaka na mandrora na aiza na aiza, ny lalàna UAE dia henjana!
Ny zava-misy izany Ny UAE dia tantanana amin'ny politika sy lalàna hentitra, iray amin'ireo firenena milamina indrindra miaina ny maha sesitany azy. Ary koa ny finoana silamo amin'ny maha-fivavahana ofisialy ny fitsipi-pitondran-tena sy ny fiarahamonina malefaka. QE dia ambany dia ambany ny heloka bevava noho ny kolontsaina, ny fivavahana ary koa ny mpitandro ny filaminana mahery vaika. Nampiditra ny milina sy ny teknôlôjia ny firenena mba hampivoatra ny filaminana amin'ny lafiny rehetra amin'ny tanàna. Raha ny marina, ny tontolo iainana azo antoka dia antony mahatonga ny fitomboan'ny mpiasa expact ao amin'ny firenena.
Aza manao fitafiana ampahibemaso; Izany dia manohitra ny kolontsaina sy ny fivavahana. Heverina ho manafintohina izany. Ny zaridaina irery eny amoron-dranomasina ihany koa dia mety hanimba anao.
Midira amin'ny mpiasa UAE aorian'ny famalian-tsain'ireo antony ireo!
Fomba ahoana no handefasana fanadinadinan'ny asa any UAE?
Ny UAE dia feno fahafahana miasa any amin'ny sehatra matihanina samihafa. Na izany aza, tsy ny rehetra no afaka miasa ao amin'ny firenena Arabo, fa ny vitsivitsy ihany no mahafantatra ny familiana miaraka amin'ny tafatafa. Ny fitomboan'ny fifaninanana amin'ny asa any UAE dia mahatonga ny dinidinika ho zava-dehibe kokoa amin'ny fananganana asa. Fomba iray lehibe amin'ny fikarohana asa izany; Tsy maintsy mitady fikarohana momba ny zavatra ilaina sy ny zavatra takian'ny mpampiasa ianao ary manao fihetsika mifanaraka amin'ny saha misy anao. Na dia sarotra aza ny mampiroborobo asa iray, dia manome fahafahana ho an'ny olona manana fahalalana mba handresena lahatra ny mpampiasa mora foana.
Ny fomba manoratra sy manolotra ny resume dia singa manan-danja. Saingy ho an'ny lisitry ny lisitra, ny dinidinika tena goavana indrindra dia ny resadresaka. Izany dia rehefa tsy maintsy manome ny tsara indrindra vitanao ianao mba handresy lahatra ny mpampiasa. Ny fahafahanao hanaporofo ny azo atao ny zavatra nolazainao tao amin'ny CV.
Ny fandaozana tafatafa dia mitaky mihoatra noho ny fikarohana fanontaniana fanadihadiana mety. Mazava ho azy fa mila mahafantatra ny tantara sy ny rafitra misy orinasa iray ataonao ianao. Maneho fahalianana sy fanoloran-tena amin'ny orinasa orinasa. Ny ankamaroan'ny mpikaroka dia tsy mahavita ny lafiny lehibe amin'ny fifanakalozan-kevitra, fifandraisana; Matetika no diso hevitra izy raha tsy mamaly fanontaniana fotsiny.
Ny resadresaka dia tokony ho fomba roa samy hafa; tokony hifampiresaka eo amin'ny mpangataka sy ny mpikaroka. Raha ny marina dia tokony hametraka fanontaniana ianao mba hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara. Raha manahy ny rehetra, dieny sy aorian'ny fanadinadinana, ny rehetra dia hanampy anao hihazona fahatokiana sy hahazo ny asa
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hanampy anao amin'ny dingana:
Ny fiakanjo dia manana ny zavatra rehetra ifandraisany amin'ny fahatsapana voalohany, izay mampisy fiantraikany amin'ny fomba fijerin'ny mpanadihady iray. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia tarihina hitafy am-bava. Ny vehivavy dia manao akanjo marevaka sy malefaka ary ny lehilahy dia manao akanjo fitondra miasa. Zava-dehibe izany, fa ny fototry ny fanamafisana ny mpanadihady. Tsy maintsy mivoaka mihoatra ny fomba fitafy fanao ianao; Aoka ho hendry ianao ary hahalalanao ny fehezan-dalàna amin'ny orinasa. Ny mpampiasa dia samy hafa amin'ny faniriana akanjo.
Ny kolontsaina dia manan-danja ho an'ny olona any UAE. Ny akanjo dia singa manan-danja amin'ny kolontsaina; Ity dia tokony ho fanombohana anao amin'ny fananana fahatsapana voalohany. Fantaro ny toe-tsain'ny fikambanana iray ary ataovy amin'ny fomba tsara. Mety hahaliana anao ny mpampiasa anao, satria manao akanjo araka izay antenainy ianao.
Manontania tena talohan'ny resadresaka
Ny ankamaroan'ny olona dia manahy ny karazana fanontaniana mety hitranga ao amin'ny tafatafa. Sorena mahazatra izany; mahita ny valiny marina araka izay andrasan'ny mpanadihady. Ny fanontaniana iraisan'ny interviewer dia inona no manosika anao amin'ny sehatra manokana. Ny fahafahan'ireo mpikaroka dia samy hafa amin'ny fahaizana takiana. Mila mandresy lahatra hatrany ny mpampiasa anao ianao satria ny mpampiasa ambony no mandinika anao. Miomàna.
Diniho koa ny herinao, ny fahalemena, ny fahafahana, ary ny fandrahonana mifototra amin'ny fenitra indostrialy. Hahazo fotoana mora hamaliana fanontaniana fanadihadiana araka izay takian'ny mpanadin-kevitra ianao ka afaka mahita asa. Tokony ho fantatrao ny karazana mpampiasa izay mifanaraka amin'ny fahaiza-manaonao. Ny fampisehoana ny tenanao amin'ny mpampiasa marina dia mampitombo ny fahafaha mahazo asa any UAE.
Voalohany, tokony ho tadidinao fa tany amin'ny tanin'ny Arabo ianao ary fantaro ny fototry ny zavatra heveriny fa mety sy diso. Tadidio ny resadresaka iray momba ny fananana fahatsapana. Raha ny marina, tokony ho resy lahatra ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fepetrao ianao ary manararaotra ny taratasy alohan'ny hamoahana anao ho amin'ny resadresaka. Na izany aza, mila mahazo antoka izy ireo ny toetra sy ny fitondran-tenan'ny olona alohan'ny hirany. Izany no mahatonga ny fanadinadinana ny dingana farany sy manan-danja amin'ny dingan'ny fandraisam-bahiny.
Ankoatra ny fitafy amin'ny fomba mahazatra, ny safidinao, ary ny fitazonana endrika mahafinaritra dia tokony hidina amin'ny kolontsaina Arabo ianao. Na dia fihetsika tsara aza ny tanana iray, dia tsy mety ny manolotra tanana amin'ny mpivady. Ho tsara kokoa ianao raha miandry azy ireo hanomboka ny tanana. Ary koa, ny kolontsaina Arabo dia mihevitra fa tsy maninona raha mandà tsy hisakafo ianao. Rehefa omena kafe, dite, na rano vera ianao, azonao antoka fa haka izany.
Ireo toro-hevitra etikety mahazatra dia ahitana ny fiandrasana ny mpanadina hanome seza, hihazona ny mason'ny rehetra amin'ny tontonana ary hitazona feo malefaka rehefa mamaly ireo fanontaniana. Aza malahelo eo amin'ny sezanao mandritra ny tafatafa, mipetraha mivantana. Aza atao amin'ny fihetsiketsehana tafahoatra toy ny tongotra sy ny tanana mandritra ny resadresaka iray. Tahaka ny any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao, aza mampiasa finday amin'ny finday raha ao anaty resadresaka ao Emirà Arabo Mitambatra, heverina ho tsy manaja.
Mianara mifanakalo vola
Mazava ho azy fa tsy ianao irery no ao amin'ny tsipika fandraisana mpiasa. Angamba, ny lafiny tokana manavaka anao amin'ireo mpifaninana hafa dia ny karama. Raha tokony handinika ny traikefanao sy ny ilainao amin'ny filazanao karama ianao, dia tokony ho hendry ianao fa tsy hiteny mihoatra noho ny tahan'ny tsena.
Ny fametrahana fanadihadiana dia mifototra amin'ny fikarohana mety.
Miasa amin'ny maha mpampianatra azy any UAE
Ny fiasa ao amin'ny UAE dia traikefa mahafinaritra raha te hiala amin'ny trano ianao. Maro ireo asa sy tolotra maro ho an'ireo vahiny any amin'ny UAE raha toa ka vonona ianao ary manana ny taratasy ho an'ny kalitao. Maro amin'ny Anglisy, Amerikanina, Kanadianina ary Shinoa no mahavita asa tsy misy fanakanana na olana. Noho ny politika sy ny fitsipika dia misy karama mendrika.
Ny fampianarana ny asa dia anisan'ny asa mahazatra indrindra any ivelany any amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Ny antony dia ny governemanta ao Emirates no nitarika ny ezaka natao hanohanana ny rafi-pampianarana Emirati. Ny fananganana fiarahamonina mifototra amin'ny fahalalana ao amin'ny tontolo Arabo no fomba tsara indrindra hanampiana ny taranaka ho avy amin'ny zavatra ilaina amin'ny toekarena maharitra. Ny soatoavina fototra izay mamantatra ny firenena dia mikatsaka ny hametraka ny soatoavina maha-olona sy ny fanoloran-tena amin'ny maha-matihanina sy ny fangaraharana Mba hanaovana izany, ny fitadiavana mpiasa mendri-pitokisana dia manao ampahany manan-danja amin'ny dingana hahatratrarana ny tanjona
Ny sekolim-panjakana dia toerana hametrahana ny tetikady. Amin'izany, ny asa dia avo lenta. Ny governemanta dia vonona ny hampiasa vola be amin'ny mpiasa vahiny mba hanatsarana ny rafi-panabeazana. Nahazo famatsiam-bola goavana ny sekolim-panjakana ary nizara ampahany betsaka tamin'ny tetibolam-pirenena mba hanomezana fahafahana ny ankizy Emirati hahazo ny sekoly tsara indrindra.
Ny fandaharan'asa dia natao hamolavola rafitra iray vaovao mba hanomanana ny ankizy ho an'ny fiaraha-monina faratampony. Mba hanaovana izany, ny Minisiteran'ny Fampianarana dia nampitombo ny fanamafisany ny fandaharam-pampianarana ho an'ny mpampianatra Anglisy. Ny teny anglisy dia ampianarina amin'ny sehatra rehetra amin'ny rafitra. Anisan'ny lohahevitra fototra miaraka amin'ny matematika sy ny siansa izy io. Ny hafa ao anatin'io lisitra io dia lohahevitra azo tsapain-tanana toy ny Business and Entrepreneurship, ny fanabeazana ara-batana, ny fahaiza-miaina, ny siansa momba ny informatika, ary ny teknolojia momba ny teknolojia. Izy ireo dia atolotra eo anelanelan'ny 10-12 ary efa nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny mponina.
Tsy toy ny any an-trano ny fampianarana ao amin'ny UAE dia fotoana mety tsy andrandraina. Be dia be ny mianatra sy mahazo tombontsoa amin'ny fiasana ao amin'ny UAE fa tsy tokony ho tadidinao raha toa ianao maniry ny hiaina eto ho toy ny mpivahiny.
Ny fepetra takian'ny mpampianatra dia miovaova arakaraka ny toerana misy azy. Matetika koa izy ireo no manitsy ny fahasamihafana iombonana. Na izany aza, ny fepetra takiana amin'ny ankapobeny dia toy ny torolalana;
Ny mari-pahaizana licence amin'ny fanabeazana zaza tsy ampy taona na ny taratasy fanamarinana azo antoka avy amin'ny orinasa fantatra
Manana Lalàna momba ny fampianarana
Taona 2 tamin'ny traikefa teo aloha teo amin'ny Kardinaly na tanimboly talohan'ny fampiharana
Ho an'ny asa fampianarana amin'ny teny Anglisy, mila fepetra manaraka ianao
Fanamarinana CELTA na Fampahafantarana momba ny Lalàna / Lalàna
Taona 2 tamin'ny traikefa teo aloha
Ny fiomanana amin'ny asa any UAE dia mitaky antonta-taratasy mifanaraka amin'ny lalàn'ny tany. Ny famandrihana ny antontan-taratasinao dia ny dingana manan-danja voalohany manoloana ity dingana ity. Ny visa momba ny asa dia ny tapakilanao hahazoana ny zo sy tombontsoa na asa. Zava-dehibe iray ho an'ireo vahiny vonona ny hahazo asa eto. Azonao atao ny miditra an-tserasera amin'ny visa vahiny na fizahantany amin'ny fizahantany, fa mila mandefa ny volanao amin'ny visa ianao rehefa nahita asa. Ny ankamaroan'ny vahiny any Dubai dia tsy voatery hahazo visa alohan'ny hahatongavany. Tokony hitandrina ihany koa ianao fa ny fireneny amin'ny fireneny dia mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra horaisina. Ohatra, ny sasany amin'ireo olom-pirenena manana alalana hitazona ny fahazoan-dàlany any Emirà Arabo mitambatra mandritra ny andro 90 dia ahitana Amerikana, Anglisy, Kanadianina ary Sinoa.
Ny fiasa tsy misy ny visa mifanaraka amin'izany dia tsy azo ekena satria mety hampidi-doza izany. Raha tratra ianao dia ho sahirana amin'ny tsy fananana azy. Raha tsy izany, dia takiana aminao ny handao ny firenena rehefa tapitra ny fisokafanao. Soa ihany, amin'ny fitadiavana asa, ny mpampiasa anao dia hanao ny fizotry ny visa ho anao ka tsy voatery hisalasala amin'izany ianao. Ny orinasa dia handray ny dingana. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia alefao ny antontan-taratasy ofisialy toy ny laharan'ny pasipaoronao hanombohana ny dingana. Tsy izany rehetra izany anefa no ilaina mba hahafeno ny fepetra momba ny asa.
Ny fanoloran-kevitry ny governemanta Emirati hanamafy ny fampandrosoana ny vahoakany dia nitarika fampidiran-dresaka hampianarana asa. Fotoana tena tsara ho an'ny vahiny mitady asa noho ny fihenanam-bahoaka sy ny fifaninana ho any an-trano. Raha te-hanao ny tsara indrindra amin'ny fiainanao ianao amin'ny maha-mpivahiny ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra anao, dia manana vintana tsara koa ianao handoavana ny vola amin'izany. Na inona na inona antony tokony hijanonanao any amin'ny UAE, dia afaka mandray soa avy amin'ny bonus izay miaraka aminy ianao. Ohatra, afaka manosika ny fianakavianao ho amin'ny fialan-tsasatra ianao mba hankafizanao ireo faritra tsy misy fetra amin'ny firenena matanjaka indrindra amin'ny fitomboan'ny firenena Arabo.
6 manan-danja lehibe mba hahamarika rehefa miasa any UAE
Ny fiheverana ny fialàna amin'ny tanindrazanao dia mety hampatahotra. Na izany aza, ny UAE dia manome ny traikefa mahaliana indrindra ho an'ny fikambanana. Raha tsy misy ny sehatry ny asa aman-draharaham-pahaizana, dia misy ny fahafahana tsy tambo isaina ao amin'ny firenena Arabo. Tsy midika izany fa hahazo asa haingana ianao; Tsy maintsy mitady fikarohana momba ny mpampiasa mety ianao ary mandalo ny dinidinika amin'ny adihevitra momba ny asa mba hiantohana asa be karama amin'ny UAE. Na dia izany aza, ny fitsaboana ao amin'ny firenena ho toy ny mpiasa manontolo andro dia maka mihoatra noho ny karama tsara sy ny fiarovana ny asa.
Tokony ho fantatra amin'ny politikan'ny orinasa ianao ary ny tena manan-danja indrindra amin'ny zonao. Ireo singa manan-danja hafa tokony hijerena ny ora fiasantsika, ny vakansy ary ny tahan'ny karama. Na efa any amin'ny firenena ianao na mikasa ny hifindra amin'ny asa fitadiavana asa, dia zava-dehibe ny manamarika ireto toe-javatra manaraka ireto.
Ny lalàna UAE dia mitaky ny mpampiasa mba handoavana ny sanda rehetra mifandraika amin'ny fitsangatsanganana sy ny fandraisana mpiasa. Fanasana amin'ny tafatafa iray, tsy tokony ho sahiran-tsaina noho ny saran-dalan'ny tapakilam-piaramanidina ianao ary manasitrana visa iray mankany UAE. Andraikitry ny mpampiasa izany. Ny saram-pandraharahana rehetra ataon'ny mpiasan'ny fandraisam-bahiny dia tokony ho karaman'ny mpampiasa anao. Ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana dia tsy mahatsapa an'ity politika ity izay manararaotra ny mpampiasa. Ataovy azo antoka fa ny masoivohon'ny mpandraharaha dia mametraka ny fankatoavan'ny governemanta ny tanindrazanao mba hisorohana ireo zava-mitranga rehetra na ho latsa-paka amin'ny olona ratsy fanahy.
Tokony hahafantatra ny fepetra rehetra momba ny fifanekena asa ianao. Makà fotoana hamakiana ireo singa rehetra ao amin'ny fifanekena ary ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny tolotra asa. Asao ny mpampiasa anao na ny sampan-draharaha mpitrandraka amin'ny zavatra tsy mazava na tsy mahazatra. Tokony hatao izany alohan'ny hanaovana drafitra handeha any UAE, hahatakatra ny zava-drehetra.
Jereo ny lohatenin'ny asa, ny karama, ary ny andraikitra voafaritra arak'izay asa famaritana ny asa. Tokony ho mahazo aina amin'ny andraikitra tsirairay ianao ary tokony hifanaraka amin'ny fahaiza-manaonao izy ireo. Afaka anontaniana ianao raha tsy azonao antoka ny andraikitra sasantsasany, aza mieritreritra fa ny mpampiasa dia hanome fiofanana. Ny sonia dia midika fa manaiky sy mahavita ny zava-drehetra ianao amin'ny fifanarahana asa.
Hamarino ny fifanarahana momba ny asa miaraka amin'ny tolotra asa tany am-piandohana, tokony hiaraka izy ireo.
Arovy ny antontan-taratasy
Aorian'ny fandraisana ny tolotra asa sy ny fifanarahana asa mahomby dia ataovy maromaro amin'ireo antontan-taratasy. Ny mari-pamantarana misy anao sy ireo antontan-taratasy mifandraika amin'izany, anisan'izany ny fiantohana, dia tokony ho ao anaty kopia koa. Fitsipika mialoha mba hisorohana ny fahaverezana na ny fahavoazana. Ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'ny asa dia tokony ho amin'ny dika mitovy ihany koa. Na dia aorian'ny asa azonao aza dia arovy tsara ny tahirin-kevitra. Tsy fantatrao velively!
Fanitsiana ny taratasy
Rehefa tonga any UAE ianao, dia andraikitry ny mpampiasa ny manara-maso anao ao amin'ny firenena ary miantoka ny hametrahana anao. Ny saram-pandraharahana amin'ny alàlan'ny fifindra-monina sy ny fahazoan-dàlana amin'ny asa dia tokony hampiasain'ny mpampiasa anao. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia takiana ianao handefa fitsaboana ara-pahasalamana, ny fandoavana ny saram-pandehan'ny mpampiasa. Ny fahazoan-dàlana hipetraka ao an-toerana ihany koa dia ampahany amin'ny andraikitry ny mpampiasa. Izany dia mifanaraka amin'ny lalànan'ny UAE raha toa ka misalasala, manontany amin'ny masoivoho mpandraharaha na mpampiasa alohan'ny handehananao.
Tazomy ny tapakilanao
Ho an'ny fandoavam-bola na amin'ny trano fandraisam-bahiny na ny fividianana zavatra, dia tokony hajaina ny vola. Ny lalàna UAE dia manokana sy hentitra amin'ny hosoka sy ny olana hafa mifandraika amin'izany. Azonao atao koa ny manaporofo ny andraikitra sy ny fandraisana andraikitra amin'ny mpampiasa anao. Ankoatry ny fandaharam-potoana mikendry ny fandaharam-potoana, dia fomba fanao mahazatra ny fandraisana andraikitra manokana. Mitazona takelaka foana hanamarihana ny fandaniana.
Arovy koa ny taratasinao manokana. Tsy fantatrao na oviana na oviana ianao rehefa takian'ny lalàna ny hamokatra azy ireo, satria heverinao fa mpitsoa-ponenana ianao. Mazava ho azy, rehefa tonga ny fahatongavanao dia mila manamafy ny mombamomba anao sy ny fitokisany ny mpampiasa anao sy ny fikambanana hafa momba ny fanaraha-maso amin'ny fangatahana ny pasipaoronao, ny visa, ary ny fahazoanao asa. Ny antontan-taratasy dia takiana ihany koa amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana avy amin'ny mpampiasa anao.
Ataovy azo antoka fa mifidy ireo antontan-taratasy miaraka amin'ny fahazoanao alalana. Tokony ho afaka mahazo ireo tahirin-kevitra amin'ny fotoana rehetra ianao.
Rehefa tonga any UAE ny mpampiasa dia tokony hikarakara ny fanodinana ny antontan-taratasy rehetra. Ao anatin'ny herinandro, ny mpampiasa dia tokony hanolotra fifanekena fifanekena momba ny asa. Tokony hifanaraka amin'ny tolotra voalohany ny fifanarahana. Amin'ny toe-javatra sasany, dia tsy mety hisy asa tena izy ary misy mpampiasa tsy marary hafa. Aza miandry herinandro hafa handany ny mpampiasa raha toa ianao ka mahatsiaro fandikana na tsy fahamarinan-toetra amin'ny tolotra asa. Ambarao any amin'ny Biraon'ny Asa ho an'ny hetsika haingana sy fanampiana izany. Ankoatra izany, tokony hitatitra ny mpampiasa ianao raha tsy manefa ny karamanao amin'ny fotoana feno na amin'ny fotoana mitovy amin'ny daty nifanarahana sy ny isa amin'ny fifanarahana asa.
Ankoatra ny andrasan'ny mpampiasa, tokony ho fantatrao ny zonao araka ny lalàna UAE.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fiasan'ny UAE
Raha mikasa ny hiasa ao UAE ianao dia maro be ny tokony handinika alohan'ny hifindrana any amin'ny Tany Arabo malaza. Raha avy any Angletera, Etazonia. Kanada, ary firenena hafa miaraka amin'ny visa waivered, dia manana toerana mety hahazoanao asa ianao. Maro ireo nahazo diplaoma avy amin'ireo firenena ireo no misafidy ny hiasa amin'ireo orinasam-pirenena maro izay manana sampana mody any an-trano. Ity no fotoana tsara indrindra azon'izy ireo hananana asa sy birao. Fotoana ihany koa ny hahazo tombony amin'ny tombony azo amin'ny hetra tsy hampiakatra ny vola miditra amin'ny net.
Voalohany, andeha hojerentsika ny fizotran'ny asa any UAE
Nahazo Joba tany UAE
Ity firenena arabo malaza ity dia manana fanomezana be dia be ho an'ireo mpizaha tany sy mpitsidika izay te hipetraka eto. Tandindonin-doza sy tontolo iainana miavaka no ahafahana mivezivezy amin'ny foibe fampiroboroboana haingam-pitrandrahana haingam-pandeha miaraka amin'ireo fironana tandrify. Midika koa izany fa misy fitakiana avo lenta amin'ny fahaizana miasa. Dubai, ohatra, dia manolotra fahafahana maro ho an'ireo vahiny mitady mpikaroka hanatsara ny toekareny ao amin'ny faritra. Ity fifanarahana iraisampirenena ity dia manampy ny firenena handray soa avy amin'ny fahalalana sy ny loharanom-panafahana rehefa mahazo ny fidiram-bola tianao.
Na dia ny iray amin'ireo firenena liberaly indrindra any UAE aza dia hahita betsaka ihany koa. Mila mahafantatra ny soatoavina ara-kolontsaina sy ara-pinoana ianao satria nalaina tamim-pahamendrehana teto. Ny fivavahana sy ny kolontsaina ankapobeny dia mifamatotra amin'ny famaritana ny fiainana isan'andro. Ny fianarana ny fitondran-tenan'ny olona sy ny fomba ankapobeny amin'ny fanaovana zavatra dia hanampy anao hiatrika mora.
Momba ny asa; Ny ankamaroan'ireo mpiasa an-tsitrapo dia miasa amin'ny fifanarahana ara-bola. Ny tena zava-dehibe dia tsy azo resena ny fidiram-bola. Misy ihany koa ny fandoavam-bola fanampiana fanampiny rehefa mifarana ny fifanarahana.
Aiza no hiasa any UAE?
Raha manontany tena ianao hoe aiza ny toerana hiasa any UAE, mila manao fikarohana kely ianao. Diniho ny zava-misy fa ny indostria lehibe indrindra any UAE dia nahasarika mpiasa maro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny harena voajanahary petrolara dia nahatonga ny toekarem-pirenena namokatra ny fivoarana lehibe indrindra hita hatramin'izay. izany ny fitomboana dia nanova ny faritra ho toerana fizahan-tany lehibe ho an'ny ankamaroan'ny olona manerana an'izao tontolo izao. Noheverina ho toerana fandraharahana manta sy malaza amin'ny ho avy. Ny fanolorana ny amboara Tompondakan'ny Football dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny faritra amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao.
Androany, ity no toeram-pivarotana ara-barotra stratejika amin'ny Hoala Persika ary mitarika izao tontolo izao amin'ny importanta sy ny fanondranana. Ohatra, ny ankamaroan'ny sakafo aterina eto dia alefa. Midika izany ny fandraharahana goavana ho an'ny orinasa izay manome sakafo safidy maro karazana safidy hafa.
Ny tatitra ara-bola farany dia mampiseho fanatsarana lehibe indrindra aorian'ny fisian'ny fihodinan'ny 2008 ratsy fanahy. Nahatonga ny fanondranana ireo tsena, izay niainga tany amin'ny vidin'ny solika sy ny trano fonenana. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika dia nanjary antso ho fanairana mba hiova amin'ny sehatra hafa mba hahazoana antoka ny sehatry ny banky nirodana. Ny banky sy ny ara-bola, ny varotra ary ny varotra, ary ny fizahan-tany sy ny fialamboly no lasa fironana vaovao ao amin'ny Expo 2020 UAE.
Ny Dubai dia fantatra amin'ny fandaniam-bolan-tsakafo ary ny fiovana rehetra eo amin'ity sehatra ity dia misy fiantraikany amin'ny UAE. Ny fampiasam-bola amin'ny fanivanana ara-toekarena dia nanjary lalana azo antoka tsy misy olana. Ankoatra ny indostrian'ny indostrian'ny solika sy ny solika, dia manana fahafahana hiasa amin'ny fanjonoana, fananganana fitaovana, aluminium, fanamboaran-tsambo, asam-barotra, orinasa, ary orinasa fanafody.
Fampiharana asa amin'ny UAE
Ny Middle East dia manome asa lehibe sy fahafahana hampiasa ny fahalalanao sy ny fahaiza-manaonao. Raha toa ka nahazo diplaoma ambony na na inona na inona fianarana sy fiofanana azonao, dia afaka mahazo tombontsoa amin'ny fahafahana any amin'ny Emira Arabo Mitambatra ianao. Dubai, ohatra, dia ahafahan'ny vahiny maro mandray andraikitra amin'ny ezaka hanatsarana ny tanjon'ny fandrosoana. Midika izany fa ny vahiny dia manana fahafahana tsara hiasa eto sy ny ambiny any UAE raha tsy misy olana. Tsy hisy fifaninana ho an'ny asa, satria miverina any an-trano izy ireo ka tsy manahy ny lisitra lavitr'ireo mpangataka sy ny dingana betsaka. Anisan'ny asa faran'izay mahavariana sy fahaiza-manao amin'ny fangatahana; fandalinana statistika, fifandraisana iraisam-pirenena, algorithm design, data mining, politikam-bahoaka, tranokala tranonkala, SEO / SEM marketing, ary UI designs
Raha te-hiasa any UAE ianao; Misy dingana vitsivitsy mila dinihina. Ny fandefasana ny tsenan'ny asa any Dubai dia mila fahalalana momba ny faritra sy ny toekarena miaraka. Anisan'ny olana lehibe indrindra ny; vice, sponsorship, ary toerana hikaroka toro-hevitra. Ireto ny zavatra tokony ho azonao alohan'ny ahitanao ny asa nofinanao any Emirà Arabo Mitambatra.
Hahazo ny Visa tsara
Ny fanomanana ny asa any UAE dia mitaky fanadihadiana mifanaraka amin'izany. Ny famandrihana ny antontan-taratasinao dia ny dingana manan-danja voalohany manoloana ity dingana ity. Ny visa momba ny asa dia ny tapakilanao hahazoana ny zo sy tombontsoa na asa. Zava-dehibe iray ho an'ireo vahiny vonona ny hahazo asa eto. Azonao atao ny miditra an-tserasera amin'ny visa vahiny na fizahantany amin'ny fizahantany, fa mila mandefa ny volanao amin'ny visa ianao rehefa nahita asa. Ny ankamaroan'ny vahiny any Dubai dia tsy voatery hahazo visa alohan'ny hahatongavany. Tokony hitandrina ihany koa ianao fa ny fireneny amin'ny fireneny dia mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra horaisina. Ohatra, ny sasany amin'ireo olom-pirenena manana fahazoan-dàlana hitazona ny fahazoan-dàlany amin'ny UAE mandritra ny andro 90 dia ahitana;
Suisse, Soeda, Espaina, Slovenia, Slovakia, Romania, Portugal, Polonina, Norvezy, Malta, Luxembourg, Litoania, Liechtenstein, Latvia, Italia, Islandy, Hongria, Holland, Gresy, Alemana, France, Finland, Estonia, Danemark, Czech Republic, Cyprus, Kroasia, Bulgaria, Belzika, ary Aotrisy. Ny sasany dia tsy mila visa mandritra ny andro 30. Anisan'izany; Kanadianina, sinoa, Australianina, japoney, rosiana, Irlandy, anglisy, ary amerikana.
Ny fiasa tsy misy ny visa mifanaraka amin'izany dia mampidi-doza. Raha tratra ianao dia ho sahirana amin'ny tsy fananana azy. Raha tsy izany, dia takiana aminao ny handao ny firenena rehefa tapitra ny fisokafanao. Soa ihany, amin'ny fitadiavana asa, ny mpampiasa anao dia hanao ny fizotry ny visa ho anao ka tsy voatery hisalasala amin'izany ianao. Ny orinasa dia handray ny dingana. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia alefao ny antontan-taratasy ofisialy toy ny laharan'ny pasipaoronao hanombohana ny dingana. Tsy izany rehetra izany anefa no ilaina mba hahafeno ny fepetra momba ny asa.
Karazana fahasalamana sy asa
Mandritra ny fanodinana ny visa visa, takiana ny hanafanao ireo antontan-taratasinao. Ireo antontan-taratasy ara-pahasalamana ireo dia tsy maintsy miaraka amin'ireo kopia pasipaoro, sary, taratasy fangatahana asa ary fangatahana visa. Ny sampan-draharahan'ny fahasalamana sy ny fitsaboana ara-pitsaboana dia mitaky tanteraka ny fametrahana azy ireo alohan'ny hanombohana ny visa visa. Hasaina hanao fitsirihana ra ianao ho toy ny fepetra takian'ny Departemantan'ny fahasalamana sy ny fitsaboana ara-pitsaboana. Ny fitsapana dia tokony hifehezana ny aretina toy ny SIDA, ny Hepatitis C, ary ny raboka. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy mpitondra vahiny mitondra ny aretina afaka mamela hipetraka eto. Rehefa avy nandalo ny fitsapana dia afaka mahazo karatra ara-pahasalamana ianao, izay takiana amin'ny mpiasa vahiny any amin'ny United Arab Emirates.
Ny karatry ny asa dia mitaky foto-pasika, fifanarahana asa, fidirana amin'ny visa, lisitry ny fitsaboana, ary ny antsipirian'ny mpampiasa. Ireo tsipiriany ireo dia tsy maintsy ekena sy zakan'ny Ministeran'ny Asa.
Ny Directeur Généralat de la Residency du Sud et d'Affaires d'affaires d'Etat dia tokony hahazo ny visa fonenanao. Mitaky ny fanatrehanao manokana izy ireo mba hamitana ny fangatahana. Hameno taratasy sy hanolotra ny taratasinao (mari-pahaizana momba ny fahasalamana, fahazoan-dàlana hidirana, rakitra ara-pahasalamana, sary pasipaoro, karatra fiasan-karena ary fahazoan-dàlana hanamarina ny fizotran'ny karatra misy anao).
Miaraka amin'ireo antontan-taratasy ireo sy ny fizotry ny asa, dia ho vonona hiasa any Dubai ianao.
Hahazoana ny Internet amin'ny alàlan'ny fomba hahitana asa. Eto ianao dia ho hita eo amin'ny orinasa manakarama ao Dubai miaraka amina antsipirihany fampahalalana. Mitadiava tranonkala mahazatra sy azo ianteherana ahafahana mameno asa amin'ny fotoana takiana sy mora apetraka. Ny dikan-tserasera an-tserasera dia ahafahanao mampiasa ireo loharano kely indrindra toy ny vola sy ny fotoana satria tsy ho mihetsika amin'ny birao. Tena mety sy mahomby hampiasa ny loharanon-tserasera an-tsehatra mba ahitàna fifandraisana sy varotra eto Dubai. Tsy mivadika ireo orinasa ary amin'ny alàlan'ny tranokalan'izy ireo tsara dia mandray vahiny maro izy ireo.
Famaranana ho an'i Dubai
Dubai dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra ahazoana asa. Saingy mba hahatongavana any dia hisy ezaka maro sy fanodinana ny vaovao ilaina. Ary ianao amin'ny maha-mpitady asa anao dia mila mitantana ny asanao ianao amin'ny fikarohana amim-pahendrena. Afaka mampiasa ny orinasanay foana ianao mba hanampy anao hahazo asa any Emirà Arabo Mitambatra. Ary amin'ny ankapobeny, ny fotoana dia ny fanalahidin'ny asa any Dubai. satria, raha mikasa ny hivoatra any ivelany ianao Afaka misafidy malalaka i Dubai ho toerana azo iainana ianao. Manantena ianao fa hosoratanao ny CV anao ao amin'ny tranokalanay ary ny solontenan'ny HR dia hanampy anao hiasa any Emirates.
Ahoana no ahafahantsika manampy anao hahita asa?
Ny orinasanay dia manome ny serivisy antoka garage 100% amin'ny asa fikarohana ataonao. Amin'ireny toe-javatra ireny, manantena izahay fa hanampy anao hahita asa any Dubai. Ny ekipanay dia manampy sekta maro. From ny asa ara-barotra any Moyen-Orient sampan-draharaha. Hatramin'ny ny asan'ny banky any UAE. Ny orinasanay dia manampy ireo mpikaroka ao amin'ny UAE.
Ny orinasa Dubai City dia manampy ireo mpila ravinahitra any Afovoany Atsinanana. From India to Dubai, From Pakistan to Abu Dhabi. Isika eto no mametraka anao any amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Noho izany, aza manararaotra ny fotoana sy mitady asa miaraka amin'ny orinasa.
Miasa any Dubai!
Manampy ny fandefasana ireo fandefasana ny asa any Dubai izao izahay
Find a Job in Dubai ?. Mahagaga raha hitanao fa mety hahita izany asa nofinofy izany.
Simply alefaso ny resume ary manomboha asa vaovao amin'ny Dubai!
Afeno ny famerenana ho an'ny fastest Dubai Company ao UAE!
Manome ny tsara ny orinasa City ao Dubai mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana isaky ny fiteny ho an'ny expats Dubai. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo mpitarika sy toro-hevitra ary asa any amin'ny United Arab Emirates ianao amin'ny fiteninao.